ဘာသာပြန် | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ဘာသာပြန်. Show all posts
နိုင်ငံတကာ ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှု တွေက မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီကို တခန်းရပ် စေမလား
စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏ မိန့်ခွန်းအား ထောက်ခံနေသည့် ပြည်သူများ / သက်ထွန်းနိုင် / ဧရာဝတီ
ယခု အချိန်သည် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းမှု အတွက် အန္တရာယ် များလှသော အချိန် ဖြစ်ပေသည်။ ထိုအခြေ အနေက ၅၂ သန်းသော မြန်မာပြည်သူတို့ အာဏာရှင် စနစ်အောက်သို့ တဖန် ပြန်လည် ကျရောက် နိုင်ရုံသာမက ကမ္ဘာပေါ်တွင် နောက်ဆုံးပေါ်ထွက် ခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တခုပါ ကွယ်ပျောက် သွားနိုင်သည်။
အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ARSA ၏ သြဂုတ်လ၂၅ရက်နေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း အချိန်ကိုက်တိုက်ခိုက်မှု များနှင့် တပ်မတော်၏ နောက်ဆက်တွဲ နယ်မြေ ရှင်းလင်းမှုများနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသည် ရန်သူဟောင်းများသာမက ရန်သူ သစ်များပါ ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် ရင်ဆိုင်လာရသည်။
၂၀၁၆ မတ်လမှ တာဝန်စတင်ယူသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးရွေးကောက်ခံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အစိုးရသည် ၁၈ လတာ ကာလအတွင်း ရန်သူလျော့နည်းသွားသည်ဟူ၍ မရှိပေ။
လက်ရှိအစိုးရ၏အတိုက်အခံစာရင်း ထိပ်ဆုံးတွင် စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ယခင် အာဏာရ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ ၎င်း၏မဟာမိတ်ပါတီများနှင့် အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးအဖွဲ့တို့ ပါဝင်သည်။
ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားအရဆိုလျှင် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် အရပ်သားအစိုးရဘက်တွင် အပြည့်အဝ ရှိပုံ မပေါက်ချေ။ တပ်မတော်၏ အဓိတာဝန်မှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်သည်။ သို့ပေမယ့် အစိုးရကတော့ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းမကျသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်မည်ဟု ကတိပြုထားသည်။
ထို့ကြောင့် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်တို့၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များသည် ထိပ်တိုက် ပဋိပက္ခဖြစ်နေ သည်။ ထိုသည်ပင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသွင်ကူးပြောင်းရေးတွင် အကြီးမားဆုံး ပြဿနာဖြစ်နေဆဲပင်။
မကြာသေးမီက အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရကို ရန်သူပို၍ တိုးလာစေသည်။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ARSA အဖွဲ့သည် နောက်ထပ် ထပ်တိုးလာသည့် ရန်သူများထဲမှ တဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ထိုအဖွဲ့ကို အစိုးရက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ် တရားဝင် ကြေညာခဲ့ သည်။
တခြားရန်သူများကို ဖော်ပြရမည်ဆိုလျှင် ARSAကို ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ပေးနေသူများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကို အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓ ဘာသာအမျိုးသားရေးဝါဒီနိုင်ငံအဖြစ် သရုပ်ဖော်ပြီး ရွေးကောက်ခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သိက္ခာချနေ ကြသော နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များနှင့် ပြည်ပမီဒီယာများပါဝင်သည်။
နိုင်ငံတကာက တဖက်စောင်းနင်း ပုံဖော်နေခြင်းများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မတည်ငြိမ်မှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်အုပ်ချုပ် ရေးအမှောင်ခေတ်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်မည်ကို မြန်မာပြည်သူ အများအပြားက စိုးရိမ်နေကြသည်။ ထိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမှောင်ခေတ်ကို မြန်မာပြည်သူများသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ဆယ်စုနှစ် ၅ ခုကြာ ခံစား ခဲ့ကြရပြီးဖြစ်သည်။
ယခုကြုံတွေ့နေရသော အလားအလာမှာ ထိုခေတ်က အချောင်သမားများမှအပ မည်သူမျှ မစဉ်းစားချင်သော အိပ်မက်ဆိုး ဖြစ်သည်။ အရပ်သားအစိုးရသစ်၏ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးရန်သူများ၊ အထူးသဖြင့် စနစ်ဟောင်းမှလူများသည် ထိုအခွင့်အရေး တကျော့ပြန်လာမည်ကို စောင့်မျှော်နေကြသည်။
ထိုအဆိုးရွာဆုံးအိပ်မက်ဆိုးသာ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါက ဘုရင်စနစ်၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အာဏာရှင်စနစ် အများစု ကျင့် သုံးနေကြသည့် အရှေ့တောင်အာရှဒေသ၌ ကမ္ဘာတွင် နောက်ဆုံးပေါ်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ပျောက်ကွယ်သွား မည်ကို တကမ္ဘာလုံး မြင်တွေ့ကြရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဆိုလျှင် ရုရှားမှ ပူတင်နှင့် တူရကီမှ အာဒိုဂန်တို့ကဲ့သို့သော အနောက်ကို ဆန့်ကျင်သည့် ခေါင်းဆောင်များပေါ်ထွက် နေသည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးကိုလည်း ရိုက်ခတ်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်၏အခြေအနေသည် ယခင်ကနဲ့ မတူဘဲ အတော်ဆိုးရွားနေသည်။ ဒုက္ခသည် သိန်းနှင့်ချီ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ မောင်တောရှိ နေအိမ်အများအပြားမှာလည်း မီးလောင်ပြာပုံဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
ထိုအခြေအနေမှ အမြန်ဆုံးတည်ငြိမ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ အားလုံး၊ အထူးသဖြင့် အစိုးရသည် အရပ်သားများအပေါ် လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအားလုံးကို အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်လိုသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်းအား ထောက်ခံနေသည့် ပြည်သူများ
ရခိုင်ပဋိပက္ခအပေါ် နိုင်ငံတကာ၏ သတင်းရေးသားတင်ပြမှုနှင့် အနောက်နိုင်ငံများ၏သဘောထားက မြန်မာနိုင်ငံသည် လူနည်းစုဘင်္ဂါလီများကို ရန်လိုဆန့်ကျင်သော ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအဖြစ် သရုပ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။
“ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ဆိုးဝါးသော အမျိုးသားရေးဝါဒနောက်တွင် ညီညွတ်နေကြသည်”၊ “၂၁ ရာစု အသားရောင်ခွဲ ခြားမှု ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံ” အစရှိသည့် သတင်းခေါင်းစဉ်များကို သုံးရာတွင် နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနများသည် ၎င်းတို့ သုံးသည့်အသုံးအနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာ စဉ်းစားခြင်းမရှိကြပေ။
၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိသော မြန်မာပြည်သူများ အတွက်မူ “ဆိုးဝါးသော အမျိုးသားရေးဝါဒ” ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံး လက်ခံထားသယောင်ဖြစ်နေသောကြောင့် ထိုကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများ သည် မတရားပုတ်ခတ်ရာ ရောက်ပေသည်။
ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များကို ကရုဏာ မပြသခြင်းနှင့် တပ်မတော်၏ နယ်မြေရှင်းလင်းမှုများကို မရှုတ်ချခြင်းတို့အတွက် ၎င်း တို့က အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကျေးရွာ များမီးရှို့ခြင်းနှင့် အရပ်သားများသတ်ဖြတ်ခံရခြင်းတွင် အဓိကတာဝန်ရှိသည်ဟုလည်း စွပ်စွဲကြသည်။
“ကျေးရွာများ မီးရှို့ပြီး အမျိုးသမီးများကို အဓမ္မပြုကျင့်ကာ ကလေးငယ်များကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်သော လူမျိုး တုံး သတ်ဖြတ်မှုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဦးဆောင်နေသည်” ဟု စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ထုတ် The New York Times သတင်းစာက ရေးသားသည်။ ဒုက္ခသည် အမြောက်အမြား ထွက်ပြေးခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ လူ့အခွင့်အ ရေး ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲချက်များအတွက် “စံနမူနာပြုစရာ လူမျိုးတုံး သုတ်သင်ရှင်းလင်းမှု” (Text book example of Ethnic cleansing) ဟူသောစကားလုံးကို ကုလသမဂ္ဂက ရွေးချယ်သုံးနှုန်းသည်။
“မမြင့်မြတ်သော နိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” ခေါင်းစဉ်နှင့် သတင်းတပုဒ်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ The New Yorker မဂ္ဂဇင်းက စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဖော်ပြပြီး နောက်တနေ့တွင် ဗြိတိန်မှ Telegraph သတင်းစာက “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာစစ်တပ်၏အကျဉ်းသားလော (သို့) မကောင်းဆိုးဝါးလော” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ များပြားလှသည့်အနက်မှ ဥပမာအချို့သာဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ရေးသားခဲ့သူ ပီတာပိုဖမ်ရေးသားသော ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို ဗြိတိန်အခြေစိုက် The Independent သတင်းစာက စက်တင်လာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ခေါင်းစဉ်မှာ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိရေးသူအနေဖြင့် အကောင်းဆုံးအကြံကို ပေးရလျှင် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ခြင်းသာဖြစ်သည်” ဟူ၍ ဖော်ပြထား သည်။
ထိုသို့ရေးသားခြင်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စော်ကားလိုက်ရုံသာမက သူ့ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တောက်ပသော အနာဂတ်ကို ဆောင်ကြဉ်းပေးရန် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော သန်းပေါင်းများစွာသော မြန်မာပြည်သူများကိုလည်း စော်ကားလိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ရေးသားဖော်ပြချက်များအားလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တကယ့်လက်တွေ့အခြေအနေများနှင့် ဝေးကွာနေပြီး ပုတ်ခတ် ရေးသားသည့်သဘောမျိုးရှိသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့မေ့လျော့နေသည့် လွန်စွာအရေးပါသည့်အချက်တခုမှာ အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် တနိုင်ငံလုံး အပြတ်အသတ် အနိုင်ရပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် မြန်မာပြည်သူတို့က လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့် ပေးအပ်ခံထားရသူဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။
ထိုအချက်ကို ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ မေ့ထားသည်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
အနောက်နိုင်ငံများမှ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အင်စတီးကျူးရှင်းများသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသာမက နိုင်ငံကိုပါ အရှက်တကွဲဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နေကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေစဉ်က ၎င်းတို့ ပေးအပ်ခဲ့သောဆုကို ဆိုင်းငံ့လိုက်သည်ဟု ဗြိတိန်နိုင်ငံ ၏အကြီးဆုံး အလုပ်သမားသမဂ္ဂဖြစ်သည့် Unison ကကြေညာခဲ့သည်။ London School of Economics ကလည်း ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပေးအပ်ထားသော ဂုဏ်ထူးဆောင်နာယက ရာထူးကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမည်ဟု ထိုတက္ကသိုလ် ၏ကျောင်းသားများသမဂ္ဂမှ ကြေညာခဲ့သည်။
အနောက်နိုင်ငံများမှ လူတချို့ နှင့်အဖွဲ့အစည်းအချို့က လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်များက ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရရှိထားသော ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗဲလ်ဆုနှင့် အခြားဆုများကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန် အပြင်းအထန် တောင်းဆိုကြသည်။
ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ သို့သော် မြန်မာပြည်သူ အများစု၏အ မြင်တွင်မူ အနောက်မှ ထိုသူများနှင့် ထိုအဖွဲ့အစည်းများသည် ၎င်းတို့ယုံကြည်ချစ်ခင်သော ခေါင်းဆောင်ကို အရှက်ခွဲနေ သည်ဟုသာ မြင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ပင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အနောက်ဆန့်ကျင်ရေးအမြင်များ ခေါင်းထောင်လာသည်ကို တွေ့မြင်လာရသည်။
ရခိုင်အရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံတကာသံတမန်များကို စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ရှင်းလင်း ပြောကြားသောအခါ နိုင်ငံတကာဖိအားနှင့် စော်ကားမှုများ ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ ရပ်တည် ကြောင်းပြရန် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် အခြားမြို့ကြီးများစွာမှ ပြည်သူများသည် အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများတွင် ထိုမိန့် ခွန်းကို စုဝေးနားထောင်ခဲ့ကြသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောနေစဉ်
တကယ်တော့ မြန်မာပြည်သူအများစုသည် ဒီမိုကရေစီ အပါအဝင် အနောက်နိုင်ငံများ၏ အယူအဆများကို သဘောကျ သည့်သူများဟု ပြောဆိုနိုင်သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်အရေးတော်ပုံကို စစ်တပ်က နှိမ်နင်းပြီးကတည်းက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကို ထောက်ခံခဲ့ကြသောကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အချို့ ဥရောပနိုင်ငံများကို မြန်မာပြည်သူများမှ သဘောကျကြခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုမူ အနောက်နိုင်ငံများသည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာများအနက် တခုမျှသာဖြစ်သည့် ရခိုင်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်လိုမင်းထက်ပြုနေသည်ဟု အချို့သောသူများက စတင်မြင်လာကြပြီဖြစ်သည်။
အတိတ်တွင် အနောက်နိုင်ငံများသည် ရုရှားမှ ပူတင်နှင့် တူရကီမှ အာဒိုဂန်တို့ကဲ့သို့ သူတို့ကို ဆန့်ကျင်သည့် ခေါင်း ဆောင်များကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်စေခဲ့သည့် အမှားမျိုးကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ထိုသို့အမှားမျိုး ယခု ထပ်မံ မကျူးလွန်သင့်ပေ။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပူတင်သမ္မတအဖြစ်အရွေးခံရသောအခါ ယူကရိန်းကို အတ္တလန်တိတ်စာချုပ်အတွင်း တိုးချဲ့ ထည့် သွင်းမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ခြင်းမရှိလျှင် ရုရှားသည် ခရိုင်းမီးယားကို ပြန်သိမ်းခဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင် များက ကောက်ချက်ချသည်။ သူတို့သည် ထိုလုပ်ရပ်ကြောင့် ပူတင်တွင် အခြားရွေးစရာမရှိဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုကြသည်။
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံများနှင့်ဝေးဝေးနေပြီး အနောက်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်ဖို့အတွက် ရဲရဲတင်းတင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက် တူရကီ သည့် ဥရောပဘုံဈေးအဖွဲ့ဝင်ရန် ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် လျှောက်ထားသည်။ သို့ပေမယ့် ဥရောပသည် တူရကီကို အဖွဲ့ဝင် မပေး ဘဲ ဆလိုဗက်ကီးယားနှင့် အက်စတိုးနီးယားကဲ့သို့ သော အခြားနိုင်ငံငယ်များကို ဝင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။
ထိုသို့ငြင်းပယ်ခြင်းသည် တူရကီကို အရှက်ရအောင်လုပ်သည်ဟု နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်များက ရှုမြင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဥရောပကို အံတုရဲသည်ဟု ၎င်းတို့ယူဆသည့် အာဒိုဂန်ကို တူရကီပြည်သူများက ရွေးချယ် ခဲ့ကြသည်ဟု သုံးသပ်ကြသည်။
လက်ရှိအခြေအနေတွင် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်သည် ရာနှုန်းပြည့် တသားတည်း မဟုတ်သည်ကို အများက သိကြသော်လည်း ရခိုင် အရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကဲ့သိုသောပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ရမည်ဖြစ် သည်။
တပ်မတော်နှင့်သာဆိုင်သောကိစ္စများတွင် တပ်မတော်ကို တခါတရံ ခွဲထုတ်ပြောနိုင်သော်လည်း အရပ်သားအစိုးရနှင့်တပ် မတော်တို့ ယခုထက် ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာ ဒီမိုကရေစီအသွင် အကူးအပြောင်းအောင်မြင်မည်ဟု နားလည်ရန် လို အပ်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့ တွေ့ဆုံစဉ်
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဤရှုပ်ထွေးလှသော မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အနောက်နိုင်ငံများမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်နိုင် သည့်အချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်အရ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသောအုပ်စုနှင့် ဒီမိုကရေစီဆန့်ကျင် သောအုပ်စု ၂ စုသာရှိသည်ဟူသည့်အချက်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိအစိုးရသည် ဒီမိုကရေစီလိုလားသောအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး ကျန်အုပ်စုတွင် ယခင်စနစ်ဟောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ မဟာ မိတ်များပါဝင်သည်။ သို့သော် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းက မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိအခြေအနေကို ပုံဖော်နေသည်မှာ ဒီမိုက ရေစီဆန့်ကျင်ရေးအုပ်စု၏ စိတ်တိုင်းအကျဆုံးပုံစံ ဖြစ်နေသည်။
တကယ်တမ်းပြောရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်၏ တိုက်ပွဲအတွင်းမှ ရုန်းမထွက်နိုင် သေးပါ။ စနစ်ဟောင်းမှသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မဟာမိတ်များသည် ပြန်လည်ခေါင်းထောင်ထရန် ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး တပ်မတော်သည် နိုင်ငံရေးမှ စွန့်ခွာပြီး စစ်တန်းလျားသို့ပြန်သွားသည့် အချိန်မှသာ ထိုတိုက်ပွဲသည် ပြီးဆုံးမည့်သဘောဖြစ်သည်။ ထိုရည်မှန်းချက်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရက အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေသော ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။
အစိုးရ၏အားနည်းချက်များနှင့် မစွမ်းဆောင်နိုင်မှုများရှိသော်လည်း ထိုအခြေခံကျလှသောတိုက်ပွဲတွင် မြန်မာပြည်သူ အ များအပြားသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံနေကြဆဲဖြစ်သည်။ ထိုတိုက်ပွဲသည် မလွယ်ကူကြောင်း သူတို့ နား လည်သဘောပေါက်ကြသည်။
လက်ရှိအခြေအနေတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အသွင်အကူးအပြောင်းကာလ၏အစတွင်သာ ရှိနေသေးသည်။ ဆယ်စုနှစ်များ စွာ ကြာမြင့်သော အာဏာရှင်စနစ်၏ အကြွင်းအကျန် ပြဿနာအရှုပ်အထွေးများကို ရှင်းလင်းနေရပြီး တဖက်တွင်လည်း အာဏာကြီးမားသည့် တပ်မတော်၊ ဒီမိုကရေစီဆန့်ကျင်သည့်အုပ်စုများနှင့် အမျိုးသားရေးအင်အားစုများကလည်း ရှိနေ သည်။
အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးချိုးဖောက်ခံရသည့်ဘင်္ဂါလီများအတွက် အခြေခံအခွင့်အရေးများကို လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီအစိုးရကသာ ပြန်လည် ယူဆောင်လာပေးနိုင်သည်။
တပ်မတော်နှင့်အတိုက်အခံများက သဘောမတူညီသည့်အချက်များရှိသော်လည်း အစိုးရက ရခိုင်ပြည်နယ်၏ပြဿနာများ ကို ဖြေရှင်းရန် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ကိုဖီအာနန် ဦးဆောင်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ် အကြံပေး ကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်များကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် အချိန်တခုတော့ လိုပါလိမ့်မည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် ထိုအခြေအနေကို နိုင်ငံတကာ၏ လွဲမှားစွာ ဖော်ပြမှုများကြောင့် လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ ပြိုလဲသွားပါက အစားထိုးဝင်ရောက်နိုင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အဖွဲ့အစည်းများမရှိသေးဘဲ တပ်မတော်နှင့်၎င်း၏ အင်အားစုများသာရှိသည်။
ထိုသို့သော အခြေအနေဆိုးသာဖြစ်ခဲ့လျှင် အားလုံး အရှုံးနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး စနစ်ဟောင်းနှင့် ၎င်း၏မဟာမိတ်များသာ အောင်ပွဲခံသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအနုဆုံး ဒီမိုကရေစီသည် စစ်ဖိနပ်အောက်တွင် ကွယ်ပျောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်သူများလည်း ထပ်မံခံစားကြရမည်ဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်း အယ်ဒီတာ ကျော်စွာမိုး၏ Will Intl Condemnation Bring Down Myanmar’s Democratic Transition? ကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, October 04, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ ဘာသာပြန်, ဆောင်းပါး
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ဒုက္ခသည် အမျိုးသမီးတွေ သေကြောင်းကြံမှု နောက်ကွယ်
“ကူးစက် ရောဂါ” ဟုဆိုလျှင် ကာလ ဝမ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျား ရောဂါနှင့် ပလိပ် ရောဂါ တို့ကိုသာ ပြေးမြင် ကြမည် ဖြစ်သည်။
မိမိကိုယ် မိမိ သေကြောင်း ကြံစည်ခြင်း ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား မိမည် မဟုတ်ပေ။
သို့သော် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်မှ နှစ်ပေါင်း ၃၀ သက်တမ်းရှိ မယ်လ ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် မိမိကိုယ် မိမိ သေကြောင်း ကြံစည် ခြင်းမှာ ကူးစက် ရောဂါ သဖွယ် ဖြစ်လာ နေသည် ဟု ရှော့ကလို ငှက်ဖျား သုတေသန ဌာန (SMRU) ၏ အပူပိုင်း ဒေသ မိခင်နှင့် ကလေး ကျန်းမာရေး ပါမောက္ခ Rose McGready က ပြော သည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်က မယ်လ စခန်းတွင် မိမိကိုယ် မိမိ စေကြောင်း ကြံစည်မှု ၅၇ မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။ အကြောင်းရင်းမှာ လူမှု ဝန်းကျင်တွင် ဝင်ဆံ့မှု မရှိဘဲ အရေး အရာ မရောက် ဟု (ကိုယ့်ကိုယ်ကို) အထင် ရှိနေခြင်း၊ လူမှု စီးပွားရေး အကျပ် အတည်း ဖိအားနှင့် မရေရာသော အနာဂတ် စသည် တို့က လူအများ စုအား ၎င်းတို့၏ ထိန်းချုပ် နိုင်စွမ်းကို ကင်းမဲ့ စေခြင်းတို့ ဖြစ်သည်မှာ ထင်ရှားသည် ဟု Rose McGready က ပြောသည်။
မယ်လတွင် နေထိုင်သူ ၄၀၀၀၀ တို့သည် နိုင်ငံသား အဆင့်အတန်း မရကြသကဲ့သို့ လူမှုဖူလုံရေး စောင့်ရှောက်မှုလည်း မရကြသည့် အပြင် အစား အသောက် မှာ လည်း မသေရုံ တမည် စားသောက် ရှင်သန်နေ ကြသည်။
ပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရန်မှာလည်း အကန့်အသတ်များ ရှိသောကြောင့် အကူအညီ အထောက်အပံ့များကိုသာ မှီခိုနေကြရသည်။
လူသားရင်းမြစ်နှင့် ငွေကြေးရင်းမြစ် နည်းပါးရှားပါးသည့် ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် နယ်စပ်ဒေသမှ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့များ အတွက် အထက်ပါ အခြေ အနေမှာ စိတ်ပျက် စရာ ဖြစ်နေသည်။
ထို အခက်အခဲကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသော အချက်များမှာ စိတ်ကျန်းမာရေးသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ၏ နယ်ပယ်တရပ် ဖြစ်ကြောင်း ရပ်ရွာက နားမလည် ကြခြင်း နှင့် မူဝါဒ ချမှတ်သူများက ဦးစားပေးမှုအဆင့် နိမ့်ခြင်း တို့ ဖြစ်သည်။
ပြဿနာ၏ အဖြေမှာ ထိုပြဿနာကို ထုတ်ဖော် ဆွေးနွေးရန် ဖြစ်သည် ဟု Rose McGready က ပြောသည်။ “မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်း ကြံစည်ခြင်းကို ထုတ်ဖော် ဆွေးနွေးတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတခုကို ကျမတို့ ဖော်ထုတ် ရမယ်။ ဒါပေမယ့် လောလော ဆယ်တော့ ရွေးချယ် ဆွေးနွေးရမယ့် လူငယ် ပရိသတ်ကို ရှာတွေ့ နိုင်ဖို့ ကိုတောင် တော်တော် ကြိုးစားနေ ရတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
“မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်းကြံစည်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါဟာ ဘာကြောင့် ဒီစခန်းမှာ အရမ်း ဖြစ်နေတယ် လို့ထင်လဲ၊ တားဆီးကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်တွေ ဘာကြောင့် မထိရောက်တာလဲ ဆိုတာကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့က ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ကျောင်းက ကျောင်းသားတွေနဲ့ ကျမ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း ပဋိပက္ခ ဒေသ ကရင်ပြည်နယ်က ကရင်ဒုက္ခသည် ၄ ယောက်က မယ်လဒုက္ခသည် စခန်း အတွင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံစည်သူ၊ ကြံစည်ဖို့ ကြိုးစားသူ တဦး ဒါမှ မဟုတ် တဦးမကကို သိကြောင်း ဝန်ခံကြတယ်”
ကရင်ပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးမားဆုံး တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုနေထိုင်ရာဒေသ ဖြစ်သလို အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ အကြေား နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကြာ တိုက်ပွဲများ၏ စစ်မြေပြင်ဖြစ်သည်။
“သူက ပထမဆုံး အကြိမ် သေကြောင်းကြံစည်ဖို့ ကြိုးစားပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကျမ တယောက်တည်းကိုပဲ အဲဒီ အကြောင်း သူ ပြန်ပြောတယ်။ သူက ပိုးသတ်ဆေးတွေ သောက်လိုက်တာ။ ဘာလို့ ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ လို့ မေးတော့ သူ့ကောင်လေးက နောက်တယောက်နဲ့ ကြိုက်နေလို့ လို့ ဖြေတယ်” ဟု အသသက် ၂၀ အရွယ် လင်နန်နာ က ပြောပြသည်။
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် လော်ရာက နေ့မြင် ညပျောက် ဖြစ်ခဲ့ရသော သူငယ်ချင်း တယောက်အကြောင်း ပြောပြသည်။ “ကျောင်းက အဆောင်မှာ သူ ဘာလို့ မရှိတော့တာလဲ ဆိုတာကို ကျမက သိချင်နေတာ။ ဘယ်သူကမှ ဘာအကြောင်းမှ မပြောကြဘူး။ သင်္ဂြိုဟ်တဲ့နေ့ ရောက်မှ သူ သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေသွားတာလို့ အမေက ကျမကို ပြောပြတယ်။ ဒါပဲ သိရတာ။ အမေက ဘာမှ ဆက်မပြောဘူး။ ကျောင်းမှာလည်း ဘာဖြစ်လို့ ဘာမှ မပြောကြတာလဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ စိတ်ကူးနေတဲ့ တခြားလူငယ်တွေကို အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းက ဘယ်မှာလဲ” ဟု လော်ရာ ပြောသည်။
အသက် ၂၃ နှစ် အရွယ် ဗမာတဦး ဖြစ်တဲ့ မင်းမင်းက ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အကြောင်းရင်းတခုကို ထုတ်ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ဘိုးဘွားတွေ သေကြောင်းကြံစည်တာကို ရှက်စရာလို့ ထင်ကြတော့ ကျနော်တို့ကလည်း အဲဒီလိုဘဲ ထင်နေတာ။ ပြီးတော့ မြန်မာတွေက အရှက်အကြောက် ကြီးတယ်။ ကိုယ့်ပြဿနာကို သူများကို ထုတ်ဖော်ပြောလေ့ မရှိဘူး။ အထူးသဖြင့် အမှားတွေ ကျူးလွန်မိရင်ပေါ့” ဟု သူက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမြို့တော် ရန်ကုန်မှ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချလာသူ စန်းသီတာ၏ အမြင်မှာ သူနှင့် မတူပေ။
“လူတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေလောက်အောင် ဖြစ်စေတဲ့ စည်းကမ်းချက် ကန့်သတ်ချက်တွေ၊ ရောဂါသည်တွေကို ခွဲခြား ဆက်ဆံမှု တွေက ကျမတို့ရဲ့ ဘာသာတရားနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အရမ်းများတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျမတို့ မိန်းကလေးတွေ သိမ်ငယ် ကြရတယ်။ ဥပမာ အိမ်ထောင်မပြုဘဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ကျမတို့ ယဉ်ကျေးမှုက ချမှတ်ထားတဲ့ အရှက်ကွဲမှုကို ရင်ဆိုင်ဖို့သာ စဉ်းစားပေတော့” ဟု သူက ပြောသည်။
လူမှုစီးပွားရေး ဖိအား၊ ရောဂါသည်များကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်းထန်သော ထိခိုက်မှုများ (လူရာမဝင် သိမ်ငယ်စိတ်) နှင့် အနာဂတ် မရေရာမှု အခြေခံများ ပေါ်တွင် နက်ရှိုင်းစွာ အမြစ်တွယ်နေသော ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာများသည် မယ်လစခန်းမှ ထိခိုက်လွယ်သူများ အကြား တားဆီးကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေး အထောက်အကူ ပေးသည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်မှု ကင်းမဲ့စေသည်ဟု ထို လူငယ်များက ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
ခင်ပွန်းသည်နှင့်သာ လိင်ဆက်ဆံရန် နှင့် မိသားစု ဘဝတွင် မြှုပ်နှံရန် ကဲ့သို့သော အမျိုးသမီးများအပေါ် ယဉ်ကျေးမှု အရ တားမြစ် ပိတ်ပင်ထားခြင်းနှင့် ထို တားမြစ်ချက်အတိုင်း နေထိုင်ခြင်း မရှိပါက အရှက်ရခြင်း၊ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ ဆုံးရှုံး သကဲ့သို့ ခံစားရခြင်းများကိုလည်း ပြောဆို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထိုအခြေအနေသည် ဟိုမုန်း အပြောင်းအလဲနှင့် ကိုယ်ဝန် ဆောင်ရခြင်း၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားတို့နှင့် ပေါင်းစပ်မိသော အခါ မယ်လတွင် ကလေးမမွေးဖွားမီနှင့် မွေးဖွားပြီး နောက်ပိုင်း မိခင်များ မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်းကြံစည်ခြင်းကို ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် မွေးဖွားပြီးစ မိခင်များအကြား သေဆုံးမှု အကြောင်းရင်းများတွင် မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်းကြံစည်ခြင်းသည် ထက်ဝက် ပါဝင်သည်။
“ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နဲ့ မီးဖွားပြီးစ ကာလတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဇီဝအပြောင်းအလဲတွေကို ရင်ဆိုင် ရပြီး အဲဒီ အပြောင်းအလဲတွေကြောင့် သူတို့တွေဟာ သောကတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ပိုမို ခံစားရနိုင်တယ်” ဟု အောက်စဖို့ တက္ကသိုလ်မှ နပ်ဖီးလ် ကျန်းမာရေးဌာနမှ ပါရဂူကျောင်းသူ Gracia Fellmeth က ပြောသည်။
သူမသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ မယ်လစခန်းတွင် မမွေးဖွားမီနှင့် မီးဖွားပြီးစ ကာလ စိတ်ပိုင်းကျန်းမာရေးကို သုတေသနပြု လေ့လာနေသူ ဖြစ်သည်။
သူမ၏ စစ်တမ်းအရ မယ်လစခန်းမှ မမွေးဖွားမီနှင့် မီးဖွားပြီးစကာလ အမျိုးသမီးများ၏ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် တချိန်ချိန်တွင် စိတ် ကမောက်ကမ ဝေဒနာကို ခံစားကြရသည် ဟု ဆိုသည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ နှုန်းဖြစ်သော ၁၅ မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အလားတူသော်လည်း အဓိက ကွဲလွဲချက်မှာ ထိုဝေဒနာ၏ သက်ရောက်မှုဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် မွေးဖွားမှု ၁ သိန်းတွင် သုည ဒသမ ၈၀ သာ ရှိပြီး မယ်လတွင်မူ အဆ ၂၀ ပိုမို မြင့်မားပြီး ၁၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေသည် ဟု ဆိုသည်။
ထိုအချက်ကြောင့်ပင် SMRU သည် နယ်စပ်ဒေသတွင် မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်းကြံစည်မှု တားဆီးရေး အားထုတ်မှုများ တွင် မိခင်နှင့် မိခင်လောင်းများ အရေးကို အဓိက ထားသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အစီရင်ခံစာ အရ အမျိုးသမီးငယ်များ အကြား မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်းကြံစည်နှုန်းသည် အမျိုးသားငယ်များ၏ နှုန်းထက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်းသည် ပညာရေး အခွင့်အလမ်း အကန့်အသတ် ရှိခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေး ရင်းမြစ်များ အသုံးပြုခွင့် နည်းခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် အကန့်အသတ် ရှိခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက် ခံရနိုင်ခြေ ပိုမိုများပြားခြင်း စသည့် နောက်ခံအခြေအနေများနှင့် နက်ရှိုင်းစွာ ဆက်စပ်နေသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်းကြံစည်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုအစီရင်ခံစာက တောင်နှင့် အရှေ့အာရှမှ အမျိုးသမီးများနှင့် အနောက်တိုင်းမှ အမျိုးသမီးများအကြား မျိုးဆက်ခြား ကျန်းမာရေး ရွေးချယ်မှုများကို နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။
အနောက်တိုင်းတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်း ကြံစည်ခြင်းသည် လွန်ခဲ့သော နှစ် ၅၀ အတွင်း သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသည်။ ထိုသို့ ပြောင်းလဲလာရခြင်းမှာ သန္ဓေတားဆေး လွယ်ကူစွာ ရရှိလာခြင်း၊ ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုကို အကုန်အကျ သက်သာစွာ ရရှိခြင်း၊ လက်မထပ်ဘဲ မီးဖွားသော အမျိုးသမီးများကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှု နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
အကူအညီရရန် မျှော်လင့်ချက် မရှိဘဲ မိခင်များသည် စိတ်ခံစားမှုပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း အန္တရာယ် ကျရောက်နေရပါက ပျော်ရွှင်ကျန်းမာသော လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုကိုလည်း တည်ဆောက်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ထို့အပြင် နောက်မျိုးဆက် အတွက် မိမိတို့၏ ခံစားမှုများကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုတတ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းကို စိတ်ကျန်းမာရေး၏ အရေးပါမှုကို တန်ဖိုးထားသော မိခင်များက မြေတောင်မြှောက်ပေးရပါမည်။
“မိခင်တွေရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးဟာ တဦးချင်း စိတ်ဖိစီးမှု သာမက ကျယ်ပြန့်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေလည်း ရှိတယ်။ ကလေးတွေ အပေါ် ထိခိုက်မှုတွေမှာ အရွယ်ရောက်ချိန် အထိ ဆက်ဖြစ်တတ်တဲ့ အပြုအမူ ဆိုင်ရာ ပုံပန်းမကျတာ၊ မူမမှန်တာတွေလည်း ပါတယ်” ဟု Gracia Fellmeth က ပြောသည်။ ထို နောက်ဆက်တွဲ သက်ရောက်မှုများကို မယ်လတွင် တွေ့နေရပြီး မယ်လ အတွက် အလွန်အရေးပါသော မေးခွန်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်း ကြံစည်မှုများကို မည်သို့ တားဆီးမည်နည်း ဟူသော မေးခွန်းပင် ဖြစ်သည်။
တားဆီးကာကွယ်ရေး အကူအညီပေးရန် အတွက် ကုသမှုများကြောင့် အရှက်ရခြင်း မဖြစ်စေနိုင်သော၊ ဝေဖန်ပြစ်တင်မှု မရှိသော၊ လုံလောက်သော ဆေးဝါးရင်းမြစ်များ ရှိသည့် စိတ်ကျန်းမာရေး ဆေးခန်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်တခု လိုအပ်သည်။
ထိုဒေသမှ အမျိုးသမီး ထောင်ပေါင်းများစွာ အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော SMRU မိခင်နှင့် မိခင်လောင်း ဆေးခန်း ၂ ခုသာ ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှု ဗီဇာပြရန် မလိုသော ထိုဆေးခန်းများသို့ စက်ဘီးဆိုင်ကယ်များ၊ ထရပ်ကားများ၊ လှေများဖြင့် ရောက်လာကြသည်။ လူနာစောင့်ခန်း၏ နောက်ဘက်တွင် လူနာဆောင်များကို ကန့်လန့်ကာများဖြင့် အခန်း ဖွဲ့ထားပြီး သစ်သားကုတင်များ၊ မြန်မာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ နေရာတိုင်းတွင် တွေ့ရသော ပုဆိုးကြမ်းအခင်းများသာ ရှိနေသည်။
အမျိုးသမီး ကြီးငယ်များသည် ခုံတန်းရှည်များတွင် ရှိနေကြပြီး အချို့မှာ အရောင်စုံ အနှီးထုတ်လေးများကို စောင့်ရှောက် နေကြသည်။ အချို့မှာ ဝမ်းဗိုက်ပူပူကလေးများကို တပွတ်ပွတ်လုပ်နေကြသည်။ မိသားစု အပြင်ထွက် လည်သည့် ပုံမျိုး ဖြစ်နေပြီး အစားအစာ ဗူးများကို ဖွင့်ကာဝေမျှ စားသောက်ကြ၊ ရောက်တတ်ရာရာ ပြောဆိုနေကြသည်။
စိတ်ကျန်းမာရေး အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အေးမိ၊ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် မိခင်ငယ်နှင့် သူမ၏ မွေးကင်းစ ကလေးတို့ ထိုင်နေသော တံခါးပိတ်ထားသည့် အခန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ဒေါ်အေးမိက Gracia Fellmeth ပေးထားသည့် စိတ်ပညာ မေးခွန်းများကို ဘာသာပြန် မေးမြန်းနေပြီး ၁၉ နှစ်အရွယ် မိခင်က အစအဆုံး နှောင့်နှေးခြင်း မရှိဘဲ ပြန်လည် ဖြေကြားနေသည်။ “ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ အတွေးပေါ်ဖူးလား” စသည့် မေးခွန်းလည်း ပါဝင်သည်။ မေးမြန်း ဆွေးနွေးမှု ပြီးသော အခါ ထိုမိခင်ငယ်သည် ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဖြင့် ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားသည်။
“လာတဲ့အမျိုးသမီး စကားပြောရတာ တော်တော် ပွင့်လင်းကြတယ်” ဟု ဒေါ်အေးမိက ရှင်းပြသည်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ရွှေ့ပြောင်း အခြေချတဦး ဖြစ်ပြီး သူသည် ထိုဆေးခန်းတွင် လုပ်ကိုင်နေသည်မှာ ၃ နှစ်ခန့်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ မူလက တီဘီရောဂါ အတွက် နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး အကြံပေး လုပ်ခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သော နှစ်ကမှ Gracia Fellmeth ၏ အစီအစဉ်အရ စိတ်ကျန်းမာရေးပိုင်းသို့ ကူးပြောင်းလာခဲ့သည်။ “ဒီ အလုပ်မှာ ပျော်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ခက်တော့ ခက်ခဲပြီး အားလုံး ပြီးပြည့်စုံအောင်တော့ မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ ရောဂါ ရှာဖွေရေး အတွက် ကျမ လေ့ကျင့်သင်ကြားဖို့ လိုနေသေးတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
အထက်ပါ မိခင်နှင့် မိခင်လောင်း စိတ်ပိုင်း ကျန်းမာရေး နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပညာပေးသူများထံမှ ထောက်ကူပံ့ပိုးမှု ကင်းမဲ့သည် ဆိုသည့် စကားကို ကြားသိခဲ့ရသည်။ ကရင် ဒုက္ခသည် တဦးဖြစ်သူ အသက် ၃၀ အရွယ် မဌေးဌေး သည် မယ်လတွင် နေထိုင်သည်မှာ ၁၀ နှစ်ခန့် ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး မိခင်နှင့် မိခင်လောင်း အာဟာရ ပညာရှင် အဖြစ် စတင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး မယ်လ စခန်းတွင် မိခင်နှင့် မိခင်လောင်း စိတ်ပိုင်းကျန်းမာရေး နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပညာပေးသူ ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ် အမျိုးသမီး ၁၂ ဦး အထိ တွေ့ဆုံရလေ့ရှိပြီး တခါတွေ့လျှင် အနည်းဆုံး ၁ နာရီကြာသည်။
“နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပညာပေးမှု ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဖို့ အချိန် ယူရတယ်။ လူတိုင်းအတွက် လုပ်ပေးနိုင်ပါစေ လို့ ကျမ ဆုတောင်းတယ်။ ပါဝင်ကူညီလိုသူတွေကို ကျမ လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ရင် လေ့ကျင့်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်တော့ ကျမ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဲဒီလောက်အထိ ယုံကြည်မှု မရှိသေးဘူး” ဟု သူက ပြောပြသည်။
ကြီးကြပ်သင်ကြား ပေးနိုင်မှု ချို့တဲ့ နေသည်မှာ ထင်ရှားသည်။ ယခင်က အဖွဲ့အစည်းပေါင်း များစွာ မယ်တော် ဆေးခန်း အပါအဝင် တခြား အဖွဲ့အစည်း များက နယ်စပ်ဒေသ အတွက် စိတ်ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်များကို ထောက်ပံ့ ပေးခဲ့ကြ သော်လည်း ယဉ်ကျေးမှု အတားအဆီးများနှင့် ရန်ပုံငွေ မရှိခြင်းကြောင့် ထိုအစီအစဉ်များကို သိသိသာသာ လျှော့ချ ဖြတ်တောက်ခဲ့ကြသည်။
လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ လူသားချင်း စာနာမှု ရန်ပုံငွေမှာ လျော့ကျသွားသဖြင့် သင်တန်းပေးခြင်း အပါအဝင် စိတ်ကျန်းမာရေး ဆေးခန်း အစီအစဉ်များကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့ရန် ခက်ခဲလာသည်။ Gracia Fellmeth ၏ အစီအစဉ်မှာ အများအားဖြင့် ထောက်ပံ့ငွေ မရပေ။ ထို့ကြောင့် ဒေသခံ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပညာပေးသူများမှာ လစာ နိမ့်ကြပြီး လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု မြှင့်တင်ရေး အခွင့်အလမ်းလည်း အကန့်အသတ် ရှိနေသည်။
သူ့ကိုယ်သူ သံသယ ရှိနေသော်လည်း ဒေသအသိုင်းအဝန်း အတွက် မဌေးဌေး၏ လုပ်ငန်းကြောင့် အကျိုးခံစားရမှု ရှိနေ သည်မှာ ထင်ရှားသည်။ Gracia Fellmeth ၏ သင်တန်းအပြီး ၆ လ အကြာတွင် သူသည် သူ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု နယ်ပယ်ကို ဖဲလ်မက်သ်၏ အစီစဉ်တွင်ပါဝင်သူ ၂၅၀ အပြင် အခြားအမျိုးသမီးများနှင့် ဆန္ဒရှိပါက သူတို့၏ ခင်ပွန်းသည် များ ပါဝင်နိုင်အောင် အထိပင် တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့သည်။ အကဲဖြတ်ချက် မပေးဘဲ နားထောင်၊ နားလည် ပေးနိုင်မည့်သူ တဦးရှိသည် ဟူသော သတင်းစကားများ ပျံ့နှံ့လာခဲ့သည်။
Gracia Fellmeth ၏ မိခင်နှင့် မိခင်လောင်း စိတ်ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်၏ ခွန်အားသည် မယ်လတွင် ရှိနေသည်။ ထို အစီအစဉ်သည် စိတ်ပိုင်းစစ်ဆေး ရောဂါရှာဖွေ ပေးရုံမျှသာမက ဒေသခံများက ဒေသခံများ အတွက် စိတ်ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။ ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အဟန့်အတား ဖြစ်နေသည့် ဘာသာစကား အခုအခံကို ကျော်လွှားနိုင်ပြီး၊ မယ်လ ဒုက္ခစခန်းသာမက အခြား နယ်စပ်ဒေသရှိ ပြည်သူများကိုလည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေး မြှင့်တင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ထို့ထက်ပို၍ ပြောရပါမူ ထိုသို့သော မိခင်နှင့် မိခင်လောင်း စိတ်ပိုင်း ကျန်းမာရေး နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပညာပေးခြင်းသည် လူ့ အဖွဲ့အစည်းတခုလုံး အတွက်လည်း အရေးပါသော လမ်းညွှန်သင်ခန်းစာ တခုပေးခြင်း ဖြစ်သလို မိခင်ငယ်များ၏ စိတ်ပိုင်း ကျန်းမာခြင်းသည် အနာဂတ် မျိုးဆက်များ၏ ဘ၀ အဆင်ပြေသာယာရေး ဦးတည်နေသည်မှာ အထင်ရှားဆုံး အချက် ဖြစ်ပေသည်။
(www.refinery29.uk တွင် ဖော်ပြထားသည့် Ali McAllister ၏ Why Refugee Mothers Are Committing Suicide On The Thai-Myanmar Border ကို ဘာသာပြန်သည်။)
From : ဧရာဝတီ by Ali McAllister 13 July 2017
အမျိုးသား အမှတ်လက္ခဏာ ဆက်လက် ရှာဖွေရဦးမည့် မြန်မာနိုင်ငံ
ရန်ကုန်မြို့၌ အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှုကို ကိုလိုနီခေတ် ရဲတပ်ဖွဲ့က နှိမ်နင်းစဉ်။ (၁၉၃၉ ခုနှစ် ဝန်းကျင်က ဟု ယူဆ ရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၈၀ နီးပါးက ယခု မြန်မာဟု ခေါ်တွင်သည့် ဗမာပြည်သည် အိန္ဒိယ ပြည်ကနေ ခွဲထွက် ခဲ့ရသည်။ ခွဲထွက် လိုက်ခြင်းသည် နိုင်ငံ၏ သမိုင်း ကြောင်းတွင် အရေး အကြီးဆုံး အလှည့် အပြောင်း တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည့်တိုင် ယင်းကို သတိပြု မိခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
၁၉၃၅ တွင် ယူကေ ပါလီမန်က ဗမာပြည် အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့ကာ ၁၉၃၇ အလယ်တွင် ဗမာပြည်သည် အိန္ဒိယ အင်ပါယာ၏ ပြည်နယ် တစ်ပြည် နယ် ဖြစ်ခဲ့ ရာမှ ကိုယ်ပိုင် ရွေးကောက်ခံ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်နှင့် လန်ဒန်သို့ တိုက်ရိုက် အစီအရင် ခံရသော ဘုရင်ခံ တစ်ဦးရှိသည့်ပြည် ဖြစ်လာ ခဲ့သည်။
ယင်းသည် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ရှိရေး အတွက် လှေကားထစ် တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဗမာ၏ သီးခြား အမှတ် အသား သရုပ် လက္ခဏာကို အသိအမှတ် ပြုခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါက်အောင် ပြင်းထန်သော ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ခွဲထွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်းကာလတွင် အမှတ်အသား သရုပ် လက္ခဏာနှင့် ဆက်စပ်နေသော ပြဿနာများသည် ဖြစ်ခါစပင် ရှိနေပါသေးသည်။ ကျန်ရှိနေသော ၂၀ ရာစု ကာလများတွင်မှ ပြဿနာများ ကြီးထွားလာပြီး စစ်ပွဲများ၊ အထီးကျန်မှုနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုများဆီသို့ ဦးတည်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယနေ့တွင်တော့ အလားတူ ပြဿနာရပ်များသည် အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အကြား ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် လည်းကောင်း၊ မွတ်ဆလင် အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ ကံကြမ္မာကို လည်းကောင်း၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့် စီးပွားရေး ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ရာတွင် လည်းကောင်း ဆက်လက်ဖြစ် ပွားလျက် ရှိနေသည်။ ၎င်းပြဿနာရပ်များကို ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိသေးသည့်အပြင် ယင်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အတွက် အဓိက အရေးကြီး နေသော ကိစ္စရပ်များ ဖြစ်နေသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေ ခွဲထွက်ခြင်းသည် ဗမာ အမျိုးသားရေးဝါဒအတွက် ကြီးစွာသော အောင်ပွဲတစ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဗမာများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းလွင်ပြင် ဒေသများတွင် နေထိုင်ကာ အများစုသည် ဗမာစကားပြောသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။
၁၉ ရာစုတွင် အင်္ဂလိပ်-ဗမာ စစ်ပွဲသုံးကြိမ်က ဘူတန်နိုင်ငံ အနီးအနားကနေ ဘန်ကောက်မြို့ပြင်နားထိ ရှည်လျားသည့် ၎င်း၏ အင်ပါယာကို ပျက်စီးစေ ခဲ့ပါသည်။
၁၈၈၅ တွင် နှစ်ပေါင်းထောင်ချီနေပြီ ဖြစ်သော ဗမာတို့၏ ဘုရင် စနစ်ကို ဗြိတိန်က ဖြိုဖျက် ခဲ့ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း လွင်ပြင်ဒေသကို သိမ်းပိုက်ကာ ဗြိတိသျှ ဘားမားဟု ခေါ်တွင်သည့် အိန္ဒိယပြည်သစ်ကို ထူထောင် ခဲ့ကြသည်။ ဗမာများ၏ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်သည် ဘယ်တော့မှ နာလန် မထူ လာတော့ပါ။
ကိုလိုနီပြု အုပ်ချုပ်မှုက စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို ဆောင်ကြဉ်းလာမှုနှင့်အတူ အိန္ဒိယ တိုက်ငယ်ကနေ စိစစ်ထိန်းကျောင်းမှု မရှိသော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ သန်းနှင့်ချီ ဗမာပြည်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ဗမာပြည်သည် ပို၍ ကြွယ်ဝချမ်းသာသောနေရာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယ မိသားစုများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ပေးစွမ်းနိုင်သော ‘ပထမ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု’ လို ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၂၀ ခုနှစ်များ နှောင်းပိုင်းတွင် ရန်ကုန်သည် နယူးယောက်မြို့နှင့်အပြိုင် ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးသော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ လာရောက်ရာနေရာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၂၇ တစ်နှစ်အတွင်းမှာပင် ၄၂၈,၃၀၀ ဦး ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ (ယင်းအချိန်က ဗမာပြည် လူဦးရေမှာ ၁၀ သန်း ဝန်းကျင်သာ ရှိခဲ့ပါသည်။) ရန်ကုန်သည် အိန္ဒိယလူမျိုးတို့၏ မြို့တော် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဗမာများ အတွက်တော့ ခေတ်မှီမှု ဆိုသည်မှာ ဥရောပ တိုက်က လူမျိုးများက ထိပ်ဆုံးနေရာတွင် ရှိနေသော၊ အိန္ဒိယလူမျိုးများက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များစွာကို လွှမ်းမိုး ထားသည့် အပြင် မြို့ပြ အခြေခံ လူတန်းစား နေရာများ တွင်ကိုပါ ဝင်ရောက်လာနေသော လူ့အဖွဲ့အစည်း အဖြစ် နား လည် ထားကြသည်။
ခံစားချက်များ နာကျင် လာခဲ့ပြီး ပို၍ နည်းပါးသော တရုတ် လူမျိုး ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင် သူများ ကိုလည်း ဆန့်ကျင် ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပျက်ကပ်ကြီး ဖြစ် ပေါ် လာသော အခါ တင်းမာမှုများမှာ ပေါက်ကွဲ ထွက်လာသည်။ ပထမအကြိမ် အိန္ဒိယ လူမျိုး ဆန့်ကျင်ရေး အဓိကရုဏ်းများမှာ ရန်ကုန်မြို့တွင် ၁၉၃၀ ၌ ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီး ပထမ အကြိမ် တရုတ်လူမျိုး ဆန့်ကျင်ရေး အဓိကရုဏ်း များမှာတော့ ၁၉၃၁ တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။
ပထမမျိုးဆက် နိုင်ငံရေးသမားများမှာ ယင်းကာလလောက်မှာပင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး အမျိုးဂုဏ်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
တော်လှန်ရေးဆန်သည့် အဖွဲ့များထဲက တစ်ဖွဲ့က သူတို့ကိုယ်သူတို့ တို့ဗမာဟု အမည်တွင်စေခဲ့ပြီးSinn Fein ၏ အိုင်ယာလန် အမျိုးသားရေးဝါဒထံကနေ သဘောတရားများ ရယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယနေ့ နိုင်ငံတော်သီချင်း ဖြစ်နေသည့် သူတို့၏ သီချင်းတွင်လည်း ‘ဒါတို့မြေ’ ဆိုသည့် စာသားမျိုး ပါဝင်နေသည်။
တစ်နည်းဆိုရလျှင် ဒါဟာ မင်းတို့မြေ မဟုတ်ဘူးဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ အများစုက နိုင်ငံခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို အမြတ်လာထုတ်မှုအဖြစ် ရှုမြင် ထားကြပြီး ဥရောပရှိ လက်ဝဲစွန်းသာမက လက်ယာစွန်း အယူအဆများကိုပါ သဘောကျ နှစ်ခြိုက်ကြသည်။
အချို့က ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ရှိနေပြီဟု မြင်လာကြပြီး ၁၉၃၈ တွင် မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ရေး လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဗမာအမျိုးသားရေးဝါဒမှာ ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ ခေါ်နေသည့် ကမ္ဘာပြုမှုဖြစ်စဉ်ကြီးကို ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကို ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှား မှုများနှင့် စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ အမြဲတမ်း ဖြစ်ခဲ့ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါ။ ၁၈ နှင့် ၁၉ ရာစုနှစ်များက ဗမာဘုရင်များသည် ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ သာကီမျိုးနွယ်ဝင်များထံမှ ဆင်းသက် လာသူများ အဖြစ် ဆိုခဲ့ကြပြီး အိန္ဒိယကို ရှားပါးသောနေရာဒေသနှင့် ဉာဏ်ပညာ ဗဟုသုတများ ထွန်းကားရာ အရပ်ဒေသအဖြစ် ရှုမြင်ခဲ့ကြသည်။
မန္တလေး မင်းနေပြည်တော် ကျဆုံးချိန်ဖြစ်သော ၁၈၈၅ အထိ အိန္ဒိယနည်းလမ်းများမှာ တစ်စုံတစ်ရာ အတုယူ လုပ်ဆောင်သင့်သည့် နည်းလမ်းများအဖြစ် ရှုမြင်ခဲ့သည်။
ထိုနှစ်၌ပင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘန်နာစီ ပြည်နယ်မှ ဂိုဗင်ဒါဟု အမည်တွင်သည့် ပုဏ္ဏားမျိုးနွယ်ဝင်တစ်ဦးမှာ တော်ဝင်မျိုးနွယ်များ၏ ထုံးတမ်းဓလေ့အတိုင်း ဖြစ်စေဖို့ ပြန်လည်သုံးသပ် စိစစ်ရန်နှင့် လိုအပ်လျှင် အမှန်ပြင်ပေးရန် ဖိတ်ကြားခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
ယခုမေလတွင် Facebook က ကုလား ဆိုသည့် စကားကို လူမျိုးရေး ခွဲခြားသော အမုန်း ပွားစေသည့် စကားဖြစ် သည်ဟု ဆိုကာ ပိတ်ပင် ခဲ့သည်။ သို့သော် ယခင် ကာလ တုန်းက ကုလား ဆိုသည့် စကားလုံးမှာ အဆင့် အတန်း မြင့်မားခြင်းကို ညွှန်းဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော်ငြားလည်း ကိုလိုနီမတိုင်ခင် ခေတ်ကာလတုန်းကပင်လျှင် ကုလားဆိုသည့် စကားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။
ဗမာများအတွက်တော့ ကုလားဆိုသည့် စကားလုံးမှာ အနောက်ကနေ လာရောက်နေထိုင်သူများကို ခေါ်ဆိုသည့် မျိုးနွယ်စုဆိုင်ရာ စကားလုံး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယက လူများကို ဆိုခြင်းဖြစ်သော်လည်း ပါရှန်း၊ အာရပ်နှင့် ဥရောပလူမျိုးများလည်း ပါဝင် ပါသည်။ သို့သော် ၁၉ ရာစုနှစ်တွင် ဗမာများ၏ အတွေးထဲသို့ အသိ တစ်မျိုး ဝင်လာသည်။
ယင်းမှာ ဗမာများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မျိုးနွယ်စုများ ဖြစ်ကြပြီး ခရစ်ယာန်နှင့် မွတ်ဆလင် ကုလားတို့မှာ မြင့်မြတ်သော မြေပေါ်တွင် လာရောက် နေထိုင် ကြသော အပြင် လူမျိုး ဖြစ်ကြသည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
၁၈၅၅ တွင် မင်းတုန်း ဘုရင်က လာရောက် လည်ပတ်သည့် အရာရှိ ဆာ အာသာ ဖဲယာအား “ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးဟာ သင်တို့ ရောက်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတွေကို တစ်ကြိမ် တစ်ခါ တုန်းက အုပ်စိုး ခဲ့ဖူးတယ်။ အခုတော့ ကုလားတွေက ကျွန်တော်တို့နဲ့ နီးလာလျက် ရှိနေပြီ” ဟု ဆိုခဲ့ ဖူးသည်။
ကိုလိုနီ ဝါဒမှာ အရိုအသေ ထားရှိမှုနှင့် ရှုပ်ထွေးမှုများ ရောစပ် ထားသော မျိုးနွယ်စု ဆိုင်ရာ ခံယူချက်ကို လူမျိုးရေး အမုန်းတရား ဆီသို့ အသွင် ပြောင်းလဲ စေခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယပြည်မှ ဗမာပြည် ခွဲထွက်မှုနှင့်အတူ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများ အပေါ် ထိန်းချုပ် ကန့်သတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့သည်။ ၁၉၄၂ တွင် ဂျပန်က ဝင်ရောက် ကျူးကျော်သည့် အခါက အိန္ဒိယ လူမျိုး ထောင်နှင့်ချီ ထွက်ပြေးခဲ့ပြီး ဗမာ အမျိုးသားရေး သမားများ၏ အကြမ်းဖက်မှုကို ကြောက်လန့် သဖြင့် ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာကြတော့ပေ။
လွတ်လပ်ရေးရပြီး အချိန်တွင်လည်း အများအပြား ထွက်သွားကြသည်။ ထို့အပြင် အိန္ဒိယနှင့် တရုတ် လူမျိုးများပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များကို ဗမာ့ ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်၏ အစိတ် အပိုင်း တစ်ရပ် အဖြစ် ပြည်သူပိုင် သိမ်းသော ၁၉၆၀ ကျော် နှစ်များတွင်လည်း ထပ်မံ ထွက်သွား ကြသည်။ ထို့နောက်တွင် နိုင်ငံခြားသားကြောက်ရောဂါမှာ တရားဝင် မူဝါဒ ဖြစ်လာ ခဲ့သည်။
နယ်မြေများ ခွဲခြားထားမှုနှင့် သစ္စာရှိမှုများ
၁၉၃၅ ဗမာပြည် အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေသည်လည်း ပြည်တွင်း၌ ကွဲအက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်။ ကိုလိုနီမပြုခင် ဗမာပြည်သည် ကွဲပြားခြားနားသော လူမျိုး များနှင့် တိုင်းနိုင်ငံများစွာ တက်လိုက် ကျလိုက် အမြဲဖြစ်ပေါ်နေသော နေရာဖြစ်သည်။
ခေတ်သစ်ဗမာပြည် မြေပုံသည် အသစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် နှောင်းပိုင်း ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးသည် နိုင်ငံ အသစ်ကို စည်းလုံးမှု ရှိစေရန် ဘာမှ ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ခြင်း မရှိ ခဲ့ပါ။ ယင်းအစား လူမျိုးရေး သတ်မှတ် ခွဲခြား မှုများနှင့် နိုင်ငံရေး အကွဲအပြဲများ ဖြစ်ပေါ်အောင်သာ ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။
သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှုကို ၁၈၆၁ မှ ၁၉၃၁ အထိ ၁၀ နှစ် တစ်ကြိမ် ကောက်ယူခဲ့ရာ ဗြိတိန်သည် လူမျိုးရေး ရောထွေးမှု သဘောတရားကို ပြုလုပ်ရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယတွင် လူများသည် ဇာတ်စနစ်ဖြင့် ခွဲခြားခြင်းခံရသည်။ အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ ဗမာ၊ ရခိုင်နှင့် အချို့လူမျိုးများကို ဇာတ်စနစ် ဇယားတွင် ထည့်သွင်း ထားခဲ့သည်။
သို့သော်ငြားလည်း ၁၉၀၀ အစောပိုင်း ကာလများတွင် ဗြိတိန်သည် နှိုင်းရ ဘာသာဗေဒ သဘောတရား အယူအဆ များကို စွဲယူကာ ဗမာပြည်ရှိ လူများကို ဘာသာ စကား အရ အမျိုးအစား ခွဲခြားမှုများ စတင် လုပ်ဆောင် ခဲ့သည်။
ယင်းသည် ကိုလိုနီခေတ် မတိုင်မှီ သဘော တရားဖြစ်သော ဗမာ၊ ရှမ်း၊ မွန်နှင့် အခြားသော လူမျိုးများ အစရှိသည့် စာရင်းနှင့်လည်း တစ်စုံ တစ်ရာ အတိုင်း အတာထိ ဆက်စပ်နေသည်။
သို့သော် ၂၀ ရာစုတွင် လူမျိုးရေးကို တစ်စုံတစ်ရာ ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်း မရှိသော နိုင်ငံတော်မူဝါဒနှင့် ဆက်စပ်နေသော အရာများကဲ့သို့ မြင်လာကြသည်။
အချို့လူမျိုးများကို ဌာနတိုင်းရင်းသားများအဖြစ် ရှုမြင်ကြပြီး အချို့ကိုတော့ ယင်းကဲ့သို့ မမြင်ပေ။ အချို့ကို စစ်တပ်အတွင်း ဗမာများကဲ့သို့ပင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် ခေါ်ယူ ခဲ့စဉ်တွင် အချို့က ပါဝင်ပြီး အချို့လူမျိုး များက တပ်ကနေ အများ အပြား ထွက်ခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင် ပထဝီ အနေအထားအရ ကွဲပြားမှုလည်း ရှိနေသည်။ ဗမာပြည် မြေပြန့်ဒေသကို ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးက တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ကိုယ်ပိုင် အုပ် ချုပ်ရေးကို တိုးပေး သွားမည်ဟု သဘောတူ ခဲ့သည်။
ယင်းမှာ ကမ္ဘာပြုမှု ဖြစ်စဉ်ကြီးတွင် ပါဝင်နေသော၊ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများ ရှိနေသော၊ ကိုလိုနီစနစ် အုပ်ချုပ်ရေးကို ဆန့်ကျင်သော ဗမာပြည်ဖြစ်ခဲ့ပြီ ဗမာ အမျိုးသားရေး ဝါဒလည်း ပေါ်ထွက် လာခဲ့သည်။
အကြီးမားဆုံးသော လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားမှာ ကရင်များဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကာ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ကရင်အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှုများ ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၃၇ ပါလီမန်လွှတ်တော်တွင် သူတို့အတွက် အမတ်နေရာများ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
လွတ်လပ်ရေးကို ချဉ်းကပ် ရာတွင်လည်း ကရင် ခေါင်းဆောင်များက ဓနသဟာယ နိုင်ငံများ အတွင်း ၎င်းတို့ တိုင်းရင်းသား များ၏ အမိမြေနေရာကို ပေးရန် အတွက် လန်ဒန်ကို တောင်းဆို ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် စစ်ပွဲအတွင်းတွင် ဗြိတိန်နှင့်အတူ သစ္စာရှိရှိ တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့၏ တောင်းဆိုမှုကို ယဉ်ကျေးစွာ ငြင်းပယ် လိုက်သည့် အခါ သစ္စာဖောက် ခံရသည်ဟု ခံစားခဲ့ ရသည်။
ပြည်မနှင့်မတူသော တောင်တန်းဒေသများ အရေးလည်း ရှိသည်။ တောင်တန်းဒေသများသည် နိုင်ငံ၏ ထက်ဝက်နီးပါးရှိပြီး တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ခြင်း မခံရသော နေရာများဖြစ်သည်။ ယင်းဒေသများကို ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များက အုပ်ချုပ်ကြပြီး စီးပွားရေး ခေတ်မီတိုးတက်မှုနှင့် ၁၉၃၀ နှစ်များ က လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကနေ လုံးဝပါဝင်ခြင်း မရှိသော ဒေသများ ဖြစ် သည်။
၁၉၄၇ တွင် ဗြိတိန်တို့ ဗမာပြည်မှ ထွက်ခွာတော့မည့်အခါ ရှမ်းနှင့် အခြားသော တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များက နိုင်ငံသစ် ထူထောင်ရာတွင် ယာယီ အားဖြင့် ကျန်ရှိသော သူများနှင့် ပူးပေါင်း ခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရရှိရမည်ဟု အာမခံပေးခဲ့ပြီး ဤနည်းဖြင့် လူမျိုးရေးနှင့် နယ်မြေ သဘော တရား များသည် တပေါင်း တစည်းတည်း ဖြစ်သွား ခဲ့ရသည်။
နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး လုပ်ဆောင်မှု မအောင်မြင်ခဲ့သည့် အချိန်ကတည်းက ကိုလိုနီစနစ်က ချန်ထားခဲ့သည့် သမိုင်းအမွေဆိုးကို ကျော်လွှား အောင်မြင် ခြင်းလည်း မရှိ၊ စစ်ပွဲများ ကလည်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး ပြင်ပ ကမ္ဘာနှင့် အဆက် အသွယ်ဖြတ်ကာ တစ်သီးတခြား ရပ်တည် လာခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ် များစွာ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။
အဓိကကျသော စိန်ခေါ်မှုမှာ ဗမာအမျိုးသားရေး ဝါဒနှင့် ၎င်းနှင့် ဆက်နွှယ်နေသော အားလုံး ပါဝင်သည့် အမျိုးသားရေး အမှတ်အသား သရုပ် လက္ခဏာပင် ဖြစ်သည်။
ဗမာအမျိုးသားရေးဝါဒီများသည် ပြင်ပလူများ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုထံကနေ (အထူးသဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံမှ လာသော အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်လူမျိုးများ) နိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖို့နှင့် စည်းစည်းလုံးလုံး ရှိကြဖို့ကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ လူနည်းစုများကို ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအဖြစ် လက်ခံဖို့မှာ ဗမာများအတွက် သိသာထင်ရှားသည့် ရည်မှန်းချက် ဖြစ်သည်။
စိန်ခေါ်မှုမှာ ဗမာအမျိုးသားရေးဝါဒ ကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေသော်ငြားလည်း လွတ်လပ်ရေးခေတ်လွန်ကာလ နိုင်ငံ၏ မညီမျှမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော၊ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများ မရရှိခဲ့ကြသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများက ၎င်းတို့၏ အမှတ်အသား သရုပ်လက္ခဏာမှာ ဗမာကြီးစိုးသည့် ခေတ်မီရေးဖြစ်စဉ်ကြီးတွင် ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်ကို စိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်။
အမှတ်သား သရုပ်လက္ခဏာကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း
ဒါဆို မည်သူဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ဖြစ်ပါသလဲ။ ၁၉၉၀ အစောပိုင်း နှစ်ကာလများ၌ မြန်မာတပ်မတော်အစိုးရသည် ၁၉၂၁ က ကောက်ယူခဲ့သည့် သန်းခေါင် စာရင်း ကနေ စွဲယူကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျိုးအရေ အတွက် ၁၃၅ မျိုး ရှိသည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းတို့ထဲတွင် ၁၇ ရာစုက ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ မဂိုမင်းသား၏ သက်တော်စောင့်များကနေ ဆင်းသက်လာသော မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်များ ဖြစ်သည့် ကမန်တိုင်းရင်းသားနှင့် ၁၆၀၀ နှစ်များက မန်းချူးများထံကနေ ထွက်ပြေးလာသည့် တရုတ်စကားပြော ကိုးကန့်တိုင်းရင်းသားများ ပါဝင်သည်။
၁၉ နှင့် ၂၀ ရာစုများတွင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသည့် အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်လူမျိုးထံမှ ဆင်းသက်လာသူ များတော့ မပါဝင်ပေ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မွတ်ဆလင် လူ ဦးရေမှာလည်း မပါဝင်ပါ။
ယခုဆိုလျှင် မွတ်ဆလင် လူဦးရေသည် ၃ ဒသမ ၁ သန်းကျော် ရှိသော ရခိုင်ပြည်နယ် လူဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ ပမာဏ ရှိသည်။
ဗမာနှင့် ရခိုင်အမျိုးသားရေးဝါဒီများသည် ၎င်းတို့အား ကိုလိုနီခေတ်က ဘင်္ဂလားပြည်နယ်မှ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ (သို့မဟုတ်) များမကြာမီက တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသူများအဖြစ် ရှုမြင်ထားကြသည်။
သူတို့က သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် အမည်ကို မွေးစားကာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
၂၀၁၂ ကတည်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဓိကရုဏ်းများသည် ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသားရေးရာ ပဋိပက္ခများကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလ အခြေအနေသို့ အတိုင်း အတာ တစ်ခုအထိ ရောက်ရှိ သွားစေသည်။
သို့သော် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကို ဖြစ်စေသည့် ပြဿနာဇာစ်မြစ်မှာ ခေတ်သစ်နိုင်ငံရေးတွင် ပေါ်ထွန်းလာနေသည့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်နေသည်။
တိုင်းရင်းသားဆိုသည့် သဘောတရားကို ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲခြင်း မရှိသော အရာကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ ထွန်းသစ်စနိုင်ငံတွင် ပါဝင်ရမည့် (သို့မဟုတ်) ထုတ်ပယ်ရမည့် တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများအဖြစ် လည်းကောင်း ရှုမြင်ထားကြသည်။
ဒါဆိုရင် အနာဂတ်က ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အလျင်အမြန် ပြောင်းလဲနေသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူများသည် ယခင်က ဘယ်တော့မှ မရှိခဲ့ဖူးသည့် ပြောင်းလဲ နေထိုင်မှုများကို နိုင်ငံခြားမှသော်လည်း၊ ပြည်တွင်း၌သော် လည်းကောင်း လုပ်ဆောင်လျက် ရှိနေသည်။
သွေးနှောများ ရှိလာသလို၊ တိုင်းရင်သားလူမျိုး တစ်ဦးက အခြားသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတစ်ဦးကို လက်ထပ်ခြင်းလည်း ရှိနေသည်။
မြို့ပြဖြစ်ထွန်းမှုမှာလည်း အရှိန်အဟုန်နှင့် ထွန်းကာလာကြပြီး မကြာမီ လူအများစုမှာ ပို၍ ကြီးမားသော မြို့ကြီးအနည်းငယ်တွင် နေထိုင်လာလိမ့်မည်။
မြန်မာခေါင်းဆောင်များက သူတို့သည် ဒီမိုကရေစီ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် စီးပွားရေး ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်မှုများဆီသို့ ချီတက်နေကြောင်း ဆိုကြ သည်။
သို့သော် နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ ကိုလိုနီခေတ် ကာလ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မျိုးနွယ်စု ဆိုင်ရာ လေ့လာ ထားချက်များနှင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ပဋိပက္ခနှင့် နိုင်ငံခြားသား ကြောက်ရောဂါကို အသစ်ပြန်လည် ဖြစ်စေဖို့ အဆင်သင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ကိုလိုနီ ခေတ်လွန် ဌာန တိုင်းရင်းသားများ ရေးရာ လေ့လာထားချက် အစ ရှိသည့် ဇာတ်ထုပ်ကြီးကို တစ်ပါတည်း သယ်ဆောင် လာရသည်။
ယင်းရှုထောင့်အ ရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးမား ဆုံးသော ခြိမ်းခြောက်မှုမှာ အာဏာရှင် စနစ်ကို ပြန်မသွားရေး မဟုတ်ဘဲ မလွတ် လပ်သည့် ဒီမိုကရေစီသည် အနုတ် လက္ခဏာ ဆောင်သည့် အမျိုးသားရေးဝါဒ နှင့် ချိတ်ဆက်နေသည့် အရေးသာဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်သည် ရိုးသား ရတော့မည်ဖြစ်ပြီး သမိုင်းကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်ဝေဖန် စောကြော ရတော့မည် ဖြစ်ကာ ၂၁ ရာစု မြန်မာ အမှတ်အသား သရုပ် လက္ခဏာတွင် လူမျိုးများ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် အသစ်တစ်ဖန် ရှာဖွေရတော့မည့် အချိန် ဖြစ်ပါသည်။
Ref: Myanmar, an unfinished nation, Nikkei Asian Review
သန့်မြင့်ဦး ရေးသားပြီး ဆောင်းဦးကိုကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
ဒေါက်တာ သန့်မြင့်ဦးသည် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေး မှူးချုပ် ဦးသန့်၏ မြေးဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ သမိုင်း ပညာရှင်နှင့် စာရေး ဆရာ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ကာ The River of Lost Footsteps နှင့် Where China Meets India: Burma and the New Crossroads of Asia စသည့် စာအုပ်များကို ရေးသား ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် နယူးယောက်တိုင်း သတင်းစာ၊ ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာ၊ International Herald Tribune နှင့် Los Angeles Times သတင်းစာတို့တွင်လည်း ဆောင်း ပါးများ ရေးသားလျက် ရှိသည်။ (အယ်ဒီတာ)
From : The Vice Myanmar By: ဆောင်းဦးကိုကို
Originally published at - http://thevoicemyanmar.com/article/9572-amt
ရက္ခိုင့် တပ်မတော် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း
ရက္ခိုင့် တပ်မတော် (AA) ၏ ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင် / Reuters
“ကျွန်ုပ်တို့ နှလုံးသားမှ အိပ်မက်” အမည်ရှိ ဗီဒီယို၏ တက်ကြွ စေသော နောက်ခံ ဂီတနှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ကချင် ပြည်နယ်ရှိ ၎င်းတို့၏ စခန်း တခုတွင် ရက္ခိုင့် တပ်မတော် (AA) မှ အမျိုးသားများ သာမက အမျိုးသမီး များလည်း ပါဝင်သော လူမျိုးစု ရခိုင် စစ်သား များ၏ အာခံသော ကြုံးဝါးသံ များကို ကြားနေ ရသည်။
ထိုတပ်ဖွဲ့၏ တပ်မှူး ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင် သည် ကင်မရာ ဘက်သို့ မျက်နှာမူပြီး စကားပြော နေသည်။ “နေပြည်တော်နဲ့ မြန်မာ စစ်တပ်ကို ကျနော်တို့ ပြော ချင် တာကတော့ ကျနော်တို့ ဘယ်တော့မှ အရှုံး မပေးဘူး။ ကျနော်တို့ ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်တဲ့ အထိ ဆက်လက် တိုက်ပွဲ ဝင်သွားမယ် ဆိုတာပဲ” ဟု သူပြောသည်။
အွန်လိုင်းတွင် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ချိသည့် ဗီဒီယိုတွင် ဖော်ပြ ထားသော ထို ရည်မှန်းချက်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို မြန်မာ ဖက်ဆစ် ဝါဒနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို နှစ်ပေါင်း များစွာ သိမ်းပိုက်ပြီး ရခိုင်ပြည်သူ များကို ဖိနှိပ်နေသော မြန်မာ စစ်တပ်၏ လက်မှ လုံးဝ လွတ်မြောက် စေရေး ဖြစ်သည်။
လူသိနည်းသော ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (AA) ၏ ထူးခြားချက်မှာ ၎င်းသည် ဗဟိုအစိုးရကို ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်နေသော အသေးငယ်ဆုံး လူမျိုးစု လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့အစည်း (EAO) ဖြစ်ပြီး ၎င်းတိြု့ ပည်နယ်မှ ဝေးကွာလှသည့် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း၊ အနောက်ဘက် နယ်စပ်တွင် ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် စသည့်ကျယ်ပြန့်သော နိုင်ငံ၏ နှစ်ဖက် အစွန်းရှိ လူမျိုးစု ပြည်နယ် ၄ ခုတွင်လှုပ်ရှားနေသည် ဟူသော အချက်ဖြစ်သည်။ တပ်ဖွဲ့ဝင်အများစုမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ လာကြသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းပြီး ရက္ခိုင့် တပ်မတော်၏ အဓိက ရည်မှန်းချက်များမှာ ရခိုင်ပြည်သူများ အတွက် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ရရှိရေး၊ အမျိုးသား လက္ခဏာများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် အမျိုးသား ဂုဏ်သိက္ခာ မြှင့်တင်ရေး တို့ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သော ရခိုင်ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (United League of Arakan – ULA) ကိုလည်း တပ်ဖွဲ့ကို ထူထောင်ပြီးနောက် မကြာမီ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (Karen National Liberation Army-KNLA) နှင့်သာ ပူးတွဲလှုပ်ရှားပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မလှုပ်ရှားသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော ပြိုကွဲလုဆဲဆဲ ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေး ပါတီ/တပ်မတော် (Arakan Liberation Party/Army – ALP/A) နှင့် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်မှ ၎င်း၏ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတို့ အပေါ် ရခိုင်လူငယ်များ အကြား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စိတ်ပျက်နေခြင်းကို တုံ့ပြန်သော အားဖြင့် ထိုတပ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
ALP သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလက တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်အချို့က AA ကို ထောက်ခံကြောင်း ပြောကာ ၎င်းတို့အား ထောက်ခံသူများကို မြန်မာစစ်တပ်၏ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို ရှုတ်ချကြသည်။
ရခိုင်လူမျိုးစုများ၏ နာကြည်းချက်များ အပေါ် နိုင်ငံတကာက နားလည်မှုမှာ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင် များကို ကာလကြာရှည်စွာ ဖိနှိပ်မှုနှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အသိုင်းအဝန်း နှစ်ခုကြား ပဋိပက္ခတို့ကို အခြေခံသည်။ ထိုအချက်ကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနိမ့်ဆုံးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ဒေသ ဖြစ်စေခဲ့သော မြန်မာအစိုးရ၏ ဆယ်စုနှစ် များစွာကြာ လျစ်လျူရှုမှု နှင့် ရှည်ကြာသော မုန်းတီးမှုကို မှေးမှိန်သွားစေခဲ့သည်။
AA အဖွဲ့သည် ရခိုင်များကို ဒုတိယဆင့် နိုင်ငံသား အဖြစ် သွယ်ဝိုက်ခေါ်သော မြန်မာစကားလုံး ဖြစ်သော ရခိုင်ဟူသည့် စကားလုံးကို ပယ်ချပြီး ကိုလိုနီခေတ်က အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည့် အာရကန် ဟူသော စကားလုံးကို တိုက်ရိုက် အသုံးပြုသည်။ ရခိုင် ဟူသော စကားလုံးသည် ရခိုင်လူမျိုးစုများကို ဗမာစကားပျက် ဒေသိယစကား ပြောသည့် ကျေးတောသားများ အဖြစ် သတ်မှတ် လှောင်ပြောင်မှု ကိုလည်း ဖြစ်စေသည်။ အမေရိကန်တွင် တောင်ပိုင်းစွန်း ဒေသများမှ ဒေသခံများကို လူရာ မသွင်းသည့် သဘောမျိုးဆန်ဆန် ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်ကို မြန်မာဘုရင်များက ၁၅ ရာစုတွင် ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး ကြွယ်ဝလှသော ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို မြောက်ဦးရှိ ရှေးဟောင်းမြို့တွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းတွင်းများမှ မကျေမနပ်ဖြစ်နေသော ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများကို ဆွဲဆောင်ရန် AA ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးနှင့် အဆင့်အမြင့်ဆုံး လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ဖြစ်သော KIA က လက်ခံ လေ့ကျင့်ပေးသည်။ ၂ နှစ် အကြာ မြန်မာအစိုးရနှင့် KIA တို့အကြား ၁၇ နှစ်ကြာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ပျက်စီးသွားချိန် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် AA သည် မဟာမိတ် KIA နှင့်အတူ ရှေ့တန်း စစ်မျက်နှာသို့ ရောက်လာခဲ့သည်။ ပြင်းထန်သော တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီး အရပ်သား တသိန်းကျော် စစ်ဘေးရှောင်ရသည်။ အရပ်သား ရာချီထိခိုက် သေဆုံးရသည်။ ရွာများစွာ ပျက်ဆီးရသည်။ နှစ်ဖက် ထိခိုက်သေဆုံးမှု ထောင်နှင့်ချီ ရှိသည်။
ရက္ခိုင့် တပ်မတော် (AA) ၏ လက်မောင်း တံဆိပ်
AA သည် ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်းတွင် မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် (Northern Alliance) ၏ အစိတ်အပိုင်း အဖြစ် လှုပ်ရှားသည်။ ထို မဟာမိတ်အဖွဲ့တွင် ကိုးကန့်တရုတ်၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်တပ်မတော် (MNDAA)၊ တအာန်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA) ၊ နှင့် KIA တပ်မဟာ (၄) နှင့် တပ်မဟာ ( ၆) တို့ ပါဝင်သည်။ မြန်မာ့ပြည်တွင်းစစ် ၏ ရှုပ်ထွေးလှသော ဆက်ဆံရေးများ အရ AA သည် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ABSDF) မှ မြန်မာလူမျိုးစု စစ်သားများနှင့်လည်း ၎င်းတို့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးချိန် ၂၀၁၅ အောက်တိုဘာ အထိ ပူးတွဲလှုပ်ရှားခဲ့သည်။
ထိုမဟာမိတ် အဖွဲ့သည် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမြို့ဖြစ်သော မူဆယ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် တိုက်ခိုက်ခြင်း အပါအဝင် အစိုးရပစ်မှတ်များကို ထူးခြားသော ထိုးစစ်များ ပြုလုပ်လာနိုင်သည်။ ထို ထိုးစစ်အတွင်း အရပ်သား အများအပြား သေဆုံး ဒဏ်ရာရသည်။ တံတားများ ဖောက်ခွဲဖျက်စီးခံရသည်။ နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ် မုန်းကိုးမြို့ကို သိမ်ပိုက်ပြီး မြန်မာစစ်တပ်က အမြောက်ကြီးများ၊ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ပြီး ယင်းဒေသတွင် တပ်စွဲ ထားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းက ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာ ဖိနှိပ်မှုကို အာရုံစိုက်နေ သောကြောင့် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲများကို အာရုံမစိုက်မိကြ သော်လည်း ယခုနှစ်များ အတွင်း ထူးခြားသော ပြင်းထန်မှုများကြောင့် ထိုတိုက်ပွဲများကို ပြည်တွင်း အာရုံစိုက်မှု ပိုမိုမြင့်မားလာသည်။
AA ပါဝင်သော မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ သည် ယခင်က MNDAA ၏ အခြေစိုက်ဒေသ ဖြစ်သော လောက်ကိုင်ကို မတ်လက ဝင်တိုက်ပြီး အဓိက ဟိုတယ်များနှင့် ကာစီနို လောင်းကစားရုံများတွင် အရပ်သား၊ ရဲသား မခွဲခြားဘဲ ပစ်မှတ်ထားကာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အများအပြားကို လူသားတံတိုင်း အဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီး တောင်ပေါ်သို့ ဆုတ်ခွာသည်ဟု သတင်းများ အရ သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်အတန်ကြာ ကာလအတွင်း မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့တွင် AA ပါဝင်လာခြင်းသည် ၎င်းတို့ ဇာတိပြည်နယ် တွင် စစ်မျက်နှာ တခုဖွင့်ရန် လေ့ကျင့်တိုက်ပွဲဝင်ပြီး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ချဲ့ထွင်နိုင်မှု အပေါ် အခြေခံသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ခန့်ကပင် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များသည် ၎င်းတို့၏ ကချင်ပြည်နယ်မှ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပြန်လည် နေရာချထားပေးရန် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရကို စည်ရုံးခဲ့သော်လည်း အစိုးရက အထောက်အပံ့ မပေးခဲ့ပေ။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်မူ AA သည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဘူးသီးတောင်၊ ကျောက်တော်နှင့် မြောက်ဦးမြို့နယ်များမှ နယ်စပ် ဒေသများနှင့် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝ ရှိ ဘင်္ဂလါးဒေ့ရှ် နယ်စပ်ဒေသတွင် စစ်မျက်နှာသစ် ဖွင့်သည်။ AA နှင့် မြန်မာစစ်တပ် အကြား တိုက်ပွဲ အများအပြားတွင် ရခိုင်လက်ဖြောင့် တပ်ဖွဲ့များ ကြောင့် အရာရှိများ အပါအဝင် စစ်သားအများအပြား သေဆုံးရကြောင်း စစ်တပ်က ဝန်ခံသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့အတွင်း AA နှင့် တိုက်ပွဲအများအပြား ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အတွင်း လက်နက်ခဲယမ်း အများအပြား သိမ်းဆည်းခဲ့သည် ဟု စစ်တပ်က ကြေညာသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီ၊ မေနှင့် ဒီဇင်ဘာတွင် မြန်မာစစ်တပ်က နယ်စပ်တလျှောက် AA လှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက် တားဆီးရန် နယ်မြေ ရှင်းလင်းသဖြင့် တိုက်ပွဲများ ထပ်မံဖြစ်ပွားသည်။
AA သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ AA လှုပ်ရှားမှုများကို ထိန်းချုပ်ရန် မြန်မာစစ်တပ် သည် ၎င်း၏ အနောက်ပိုင်းတိုင်းတွင် တပ်ရင်း ၁၀ ရင်း ချထားပြီး အမှတ် ၁၅ စစ်ဆင်ရေးဌာနချုပ်ကို ဘူးသီးတောင်တွင် ထားရှိသည် ဟု သိရသည်။ အမှတ် ၃၇၄၊ ၃၇၅၊ ၃၇၆ နှင့် ၅၃၉ ခြေလျှင် တပ်ရင်းများကို ကျောက်တော်တွင် ချထားပြီး အမှတ် ၃၇၇၊ ၃၇၈နှင့် ၅၄၀ ခြေလျှင် တပ်ရင်းများကို မြောက်ဦးနှင့် အမှတ် ၃၇၉၊ ၃၈၀ နှင့် ၅၄၀ ခြေလျှင်တပ်ရင်းများကို မင်းပြားတွင် ချထားသည်ဟု သိရသည်။
AA ၏ လက်ရှိ အင်အားကို ခန့်မှန်းရန် ခက်ခဲသည်။ အချို့က စုစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅၀၀ ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းကာ ထိုပမာဏမှာ လူမျိုးစုငယ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ စံချိန်မီ အရွယ်အစား ဖြစ်သည်။ မြောက်ပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသား အမျိုးသမီး တပ်ဖွဲ့ဝင် အရေအတွက်များစွာ စုရုံးမိနေသည်။ KIA သည် အင်အား ၇၀၀၀ ရှိုပြီး ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် သည် အင်အား ၂၅၀၀၀ ရှိသည်။
တိုက်ပွဲများသည် အရပ်သား အများအပြား နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးစေပြီး သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အသိုင်းအဝန်း ၂ ခုကြား ပဋိပက္ခကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာရသူများ အတွက် နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်း ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ရန် လိုအပ်လာသည်။
လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ညှိုနှိုင်းရေးရုံး (OCHA) ၏ အစီရင်ခံစာ အရ ကျောက်တော်၊ ရသေ့တောင်နှင့် ဘူးသီးတောင်ရှိ ယာယီစခန်း ၈ ခုတွင် စစ်ဘေးရှောင် ၁၁၀၀ ရှိပြီး အရပ်သားများကို ကူညီရန် ရခိုင်ကယ်ဆယ်ရေး အေဂျင်စီများနှင့် အစိုးရတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရသည် ဟု သိရသည်။
AA ၏ အခွန်ကောက်ခြင်း၊ ဆက်ဆံရေး မကောင်းခြင်းနှင့် အတင်းအကျပ် လူသစ်စုဆောင်းသည့် သတင်းများလည်း များပြား လာသည်။ ထိုသတင်းများကို မြန်မာစစ်တပ်က ရွာများကို ရွာလုံးကျွတ် အတင်းအကျပ် ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းခြင်း၊ ဖျက်စီးခြင်း၊ သေနတ်ပြောင်းနှင့် ရိုက်နှက်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ သေနတ်ထောက်အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်း၊ လုယက်ခြင်းနှင့် နေအိမ်များကို မီးတင်ရှို့ခြင်း စသည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု သတင်းများဖြင့် တန်ပြန်သည်လည်း ရှိသည်။
တိုက်ပွဲများကြောင့် AA နှင့် ပလက်ဝမှ ချင်းလူမျိုးစု အရပ်သားများ အကြား တင်းမာမှုကိုလည်း ပိုမိုဆိုးရွားစေကာ ချင်းလူမျိုးစု ခေါင်းဆောင်များ၏ လူသိရှင်ကြား ဝေဖန်မှုနှင့် ချင်းအရပ်သားများ ကို AA က ဖမ်းဆီးကာ အတင်းအကျပ် အလုပ်စေခိုင်းသည်၊ အရပ်သား နေရာများတွင် မြေမြှုပ်မိုင်းထောင်သည် ဟူသည့် ချင်းလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့များ၏ အစီရင်ခံစာများကို ပေါ်ထွက်လာစေသည်။
ကျယ်ပြန့်သော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများနှင့် မိုင်းထောင်ခြင်းများ အတွက် ချင်းနိုင်ငံရေး ပါတီးများက တဖက်ဖက်ကို အတိအကျ မဟုတ်ဘဲ နှစ်ဖက်လုံးကို အပြစ်တင် ရှုတ်ချသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများ အများစုဖြစ်သောချင်း အရပ်သား ၃၀၀ ခန့်သည် ချင်းပြည်နယ် ရာလီကျေးရွာမှ ချင်းအမျိုးသားများကို AA က ဖမ်းဆီးနေသည် ဟု ဆိုကာ မြန်မာဘက်မှ အရှေ့မြောက်အိန္ဒိယ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်သို့် ထွက်ပြေးလာသည် ဟု အန္ဒိယမီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့သည်။
AA က ထိုစွပ်စွဲချက်ကို ဖေ့စ်ဘုတ် ကြေညာချက်ဖြင့် ငြင်းဆိုပြီး ခွဲထွက် ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့က အရပ်သားများ ထံမှ ငွေညှစ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို အယုံကြည် ကင်းမဲ့စေရန် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ် ဟန်ဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ဟု ဆိုသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဝေးကွာသီးခြား ဖြစ်နေသော အခြအနေတွင် များပြားလှစွာသော စွပ်စွဲချက်များကို အတည်ပြုနိုင်ရန် ခက်ခဲနေ သည်။
မြန်မာစစ်တပ်ကမူ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် AA အဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုများကို တုံ့ပြန်ရန် ၎င်းတို့ကို ရုပ်ဝတ္ထုအရ ထောက်ခံသည်ဟု သံသယရှိသော အရပ်သား အများအပြားကို ဖမ်းဆီးသည်။ ဗမာနိုင်ငံ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း (Assistance Association for Political Prisoners-Burma) ၏ အဆိုအရ ရခိုင်အရပ်သား ၅၈ ဦး ကို မတရားသင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇ (၁) အရ ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ထားပြီး အခြား ၈ ဦးတို့သည် စစ်တွေထောင်တွင် အမှု ရင်ဆိုင်နေရသည် ဟု သိရသည်။
ရခိုင်နိုင်ငံရေး သမားများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ နှင့် AA အဖွဲ့၏ ဆက်စပ်မှုမှာလည်း ရှုပ်ထွေးလှသည်။ ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင် ၏ ယောက္ခမသည် ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦစောကျော်လှ ဖြစ်သည်။
ရက္ခိုင့် တပ်မတော် (AA) စစ်သားများ ကချင် နယ်မြေတွင် သင်တန်း တက်စဉ်
ဧပြီလ အစောပိုင်း သင်္ကြန်ပွဲတော်အတွင်း ကလည်း အာဏာပိုင်များသည် မြောက်ဦးတွင် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် ဖလား အမည်ရှိ ရန်ပုံငွေ ဘောလုံးပွဲကို တားမြစ်ခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး နန္ဒသာရနှင့် အရပ်သား ထောက်ခံသူ ခိုင်နီမင်း ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကာ လူထုလှုံ့ဆော်မှုဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုလှုံ့ဆော်ခြင်း ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှု ဥပဒေ ၅၀၅ နှင့် တရားစွဲ ဆိုခဲ့သည်။
ထိုသို့ ဖမ်းဆီးမှုများကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တခုလုံးတွင် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုများ ဖြစ်စေပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် အပေါ် ဗမာဖိနှိပ်မှု၊ ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက် များကို မျက်ကွယ်ပြုမှု၊ ၎င်းတို့ပြည်နယ်မှ သယံဇာတများကို လုယက်မှု၊ ၎င်းတို့ကို နှစ်သိမ့်ရန် ဗဟိုအစိုးရထံမှ တာဝန်ကျေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းများ ချမှတ်မှု စသည့်ခံစားချက်များကို မိုပို ဖြစ်ပွားစေခဲ့သည်။
ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားများ ကို ပိုမို ဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ရပ်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေက AA နှင့် မြန်မာစစ်တပ်အကြား တိုက်ပွဲ စစ်ဘေးရှောင်များ အတွက် အကူအညီ ပေးရေး အရေးပေါ် အဆိုကို ပယ်ချခဲ့သည်။ ထို အရေးပေါ် အဆိုသည် AA ကို တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးတွင် ပါဝင်စေရန် ပြဿနာကို အလေးပေး တင်ပြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ပြောဆို ပယ်ချခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
AA သည် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ ဆိုင်ရာ တရုတ် အထူးသံတမန်၏ အစီအစဉ်အရ မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ဖိတ်ကြားခံရ သောကြောင့် နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံကိုလည်း တက်ရောက် ခဲ့သည်။ သို့သော် AA သည် ၎င်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ၂ နှစ်ကြာ ပြစ်တင်ဝေဖန်ခံရ ပြီးမှသာ ထိုညီလာခံ တက်ရောက်ခွင့် ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လုံးဝနီးပါးထပ်တူဖြစ်သော မြန်မာစစ်တပ် နှင့် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့၏ ပြောဆို ကြေညာချက်များသည် ထိုအဖွဲ့ကို လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးမှသာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမည် ဟု ဆိုခဲ့ကြသည်။
AA သည် လှုပ်ရှားမှုများကို ရပ်တန့်ပြီး အငြင်းပွားဖွယ်ရာ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး ရမည်ဟု ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိန်ဝင်းက အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ပြောသည်။ မတ်လက ထုတ်ပြန်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် တခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ လက်မှတ်ထိုးရေးသာ ဖြစ်ကြောင်း ထို အချက်ကို တုံ့ပြန်ရာတွင် အထူး သတိထားရန် လိုကြောင်း တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ် လက်မှတ် မထိုးသည့်အဖွဲ့များကို သတိပေးခဲ့သည်။
၎င်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ချဲ့ထွင်ရန် AA က မည်သို့ ဝင်ငွေရနေပါသနည်း။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၎င်းတို့အပေါ် ထောက်ခံမှုကို ကြည့်လျှင် ဇာတိပြည်နယ်မှ ထောက်ခံသူများ ထံမှ သာမက ရန်ကုန်မြို့ပြင်ရှိ စက်ရုံများနှင့် ကချင်ပြည်နယ် နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကျောက်စိမ်းမှော်များမှ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ထံမှ အခွန်ကောက်ခံခြင်း သည်လည်း အကျိုးအမြတ် များစွာ ရရှိစေနိုင်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မှုနှင့် မပတ်သက်ဟုလည်း တပ်အပ် မပြောနိုင်ပေ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက အစိုးရပိုင် Global New Light of Myannar သတင်းစာ၏ အမြင်သာဆုံး မျက်နှာဖုံး စာမျက်နှာများတွင် “စစ်အတွက် မည်သို့ ငွေရှာ သနည်း” ဟုအထင်အရှား ရေးသားထားသော ဆောင်းပါးတွင် ရန်ကုန်တွင် သတင်းအရ ရှာဖွေရာ AA အရာရှိများကို လက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားနှင့် ယာဘ ဆေးပြား ၃၃၀၈၀၀ တို့နှင့် တကွ မည်သို့ဖမ်းမိသည်ကို ဖော်ပြထားသည်။
AA ကလည်း ထိုနေ့တွင်ပင် စွပ်စွဲချက်များကို ကလေးဆန်ပြီး သိက္ခာမဲ့သော လုပ်ရပ်အဖြစ် ပယ်ချပြီး မြန်မာစစ်တပ် သည်သာ မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်သွယ်မှုတွင် အဓိကပါဝင်သူ ဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်သွယ်မှု သတင်း ထောက်လှမ်းခြင်းမှာလည်း လွန်စွာ အန္တရာယ်များသည်။ Root Investigation Agency မှ အွန်လိုင်း အယ်ဒီတာ ကိုမင်းမင်း ၏ နေအိမ်မှာ လွန်ခဲ့သော မတ်လက ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံကာ ထို သတင်းသမားမှာ ရန်ကုန်သို့ ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။
AA သည် ရိုဟင်ဂျာ သို့မဟုတ် မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေးကို လူသိရှင်ကြား ပြောခဲ့သော်လည်း ရိုဟင်ဂျာများသည် တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသော ဘင်္ဂါလီများသာ ဖြစ်သောကြောင့် ပြန်သွားသင့်သည်ဟု AA အရာရှိ အများအပြားက ပြောကြောင်း မတည်ငြိမ်သော ရခိုင်ပြည်နယ် အကြောင်း သတင်းရေးသားသော နိုင်ငံတကာ လေ့လာသုံးသပ်သူများက ရေးသားသည်။ ထို သဘောထားမှာ မြန်မာစစ်တပ်နှင့် အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေး ဝါဒီများနှင့် တူညီသော အမြင် ဖြစ်သည်။
ထို အနေအထားသည် မကြာသေးမီက ပြောင်းလဲခဲ့သော မြန်မာနယ်ခြားစောင့် ကင်းစခန်းများကို နောင်တွင် အာရကန် ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ရေး တပ်ဟု အမည်ပြောင်း ခဲ့သည့် ဟာရာကာ အယ်လ်ယာက် (အယူဝါဒလှုပ်ရှားမှု) အမည်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ စစ်သွေးကြွဟု သံသယရှိသူများက ချိန်ကိုက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် AA နှင့် ULA တို့က ထို စစ်သွေးကြွများကို အရိုင်းအစိုင်း မွတ်စလင် ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားများ ဟု ခေါ်ပြီး ထို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုကို ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှ ဘင်္ဂါလီ အစ္စလမ်မစ် အခြေခံဝါဒီ စစ်သွေးကြွများ၏ အကြမ်းဖက်မှုဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။
ထိုကြေညာချက်တွင် ဆက်လက်ပြီ “ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း နယ်စပ်ဒေသနှင့် ရန်ကုန် ကဲ့သို့သော အခြားမြို့ကြီးများ သည် နယ်စပ်ရှိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လူဦးရေ ပေါက်ကွဲမှု၊ ဆယ်စုနှစ် များစွာ ကြာသော တရားမဝင် ဘင်္ဂါလီများ အလွန်အကျွံ ဝင်ရောက်လာခြင်း နှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်က ဘင်္ဂါလီ ကျူးကျော်မှုနှင့် နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်ခြင်း တို့ကြောင့် ၎င်းတို့ ဆိုးကျိုးများ ခံစားနေရသည်” ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ပြယုဂ် ဆန်လွန်းသော ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံတွင် AA တက်ရောက်ခြင်းသည် ရခိုင် နစ်နာမှုများကို ဖြေရှင်းရာတွင် တိုးတက်မှု ရမည့်အလားအလာ မရှိသလောက်ဖြစ်နေကာ ၎င်းတို့ လက်နက်ကိုင် လှုပ်ရှားမှုများ ဆက်လက် နေမည့် အခြေအနေရှိနေသည်။
ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်နှင့် သူ၏ လက်အောက်ရှိ တပ်ဖွဲ့များ၏ ပြင်းထန်သော အမျိုးသားရေး သတင်းစကားကို ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အများအပြားက လက်ခံကြသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မြန်မာအစိုးရနှင့် စစ်တပ်များ အပေါ် မုန်းတီးမှုမှာ ပျံ့နှံ့ နေပြီး ပြင်ပလောက ကမူ ရခိုင်တို့၏ နိုင်ငံရေး အရ နစ်နာမှုများသည် ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေး အပေါ် အဓိကအခြေခံသည်ဟု မှားယွင်းနားလည်စေ သည်။
AA ၏ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအပေါ် နားလည်မှု မရှိခြင်းသည် ပဋိပက္ခ ပြေလည်ရေးကို ပိုမို ကြန့်ကြာစေပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်း များစွာ ပဋိပက္ခ ဖန်တီးပေးနေသည့် အသိုင်းအဝန်း နှစ်ခုကြား အကွဲအပြဲကို သက်ဆိုး ရှည်စေနိုင်သည်။ ထိုအခြေအနေသည် အကောင်းဘက် ရောက်မလာဘဲ ပိုမို ဆိုးရွား လာစေသော၊ မှားယွင်းစွာ နားလည် နေကြသော မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်၏ သွင်ပြင်တခု ဖြစ်သည်။
(Asia Times သတင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဆောင်းပါးရှင် David Scott Mathieson ၏ Shadowy rebels extend Myanmar’s wars ကို ဘာသာပြန်သည်။ ၎င်းသည် ရန်ကုန် အခြေစိုက် လွတ်လပ်သည့် စောင့်ကြည့် လေ့လာသူ ဖြစ်သည်။)
From : ဧရာဝတီ by David Scott Mathieson
တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ၁၃၅ မျိုး ဘယ်လို သတ်မှတ် ခဲ့သလဲ?
မြန်မာ အစိုးရ၊ တပ်မတော် နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းများ ကြားတွင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက် နေသော ငြိမ်ချမ်းရေး ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး မှုများ ထဲမှ အဓိက ကျသော အချက် တခုမှာ နယ်စပ် ဒေသများတွင် မည်မျှ အထိ ကိုယ်ပိုင် အုပ် ချုပ်ခွင့် ပေးသင့်သည် ဆိုခြင်း နှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အမျိုးမျိုးကို မည်ကဲ့သို့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာခွဲဝေ ပေးသင့်သည် ဆိုသည့် ကိစ္စများ နှင့် သက်ဆိုင် နေပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဒီမိုကရေစီသို့ တပိုင်းတစ အသွင်ကူးပြောင်းမှု ရှိသော်လည်း တပ်မတော်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် အာဏာအရှိဆုံး အဖွဲ့အစည်း အဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေသည်။ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် အဆက်ဆက်က တပ်မတော်၏ ဖိနှိပ်မှုများ နှင့် ပတ်သက်၍ ကာလရှည်ကြာစွာ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများ၏ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကို အလေးအနက်မထားဘဲ ငြင်းဆန်ခဲ့ ပိတ်ပင်ခဲ့ကြသည်။ တုန့်ပြန်မှု မရှိခြင်းက လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခကို အဖန်ဖန်ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ထိုအမြင်များက မြန်မာခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူက ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်နေသော ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံအထိ ရောက်လာခဲ့သည်။ မေလ ၂၄ ရက်နေ့ ပင်လုံညီလာခံ ဖွင့်ပွဲ တွင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအကြားတွင် နှစ်ပေါင်း များစွာဖြစ်ပွားခဲ့ သော အထင်အမြင်လွဲမှားမှု၊ နားလည်မှု လွဲမှားမှုများ နှင့် ထိုလွဲမှားမှုများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ များကို အပြီးတိုင်ဖယ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း တပ်မတော်အနေဖြင့် ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိခြင်းနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံက အမွေဆက်ခံခဲ့ရသော ပြဿနာ အများအပြားကို နားလည်သဘောပေါက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကိုလိုနီ ဗြိတိသျှတို့သည် ၁၉ ရာစု သူတို့ ရောက်မလာမီအချိန်ကတည်းက တူညီမှုနည်းပါးသော သို့မဟုတ် ပဋိပက္ခတွင် အမြစ်တွယ်နေသော ပြည်သူများကို ပရမ်းပတာ ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ရာစုနှစ်နှင့် ချီ၍ ရှိခဲ့သော လူမျိုးရေးအရ တင်းမာမှုများကို သွေးခွဲအုပ်ချုပ်သည့် ပုံစံဖြင့် ဗြိတိသျှတို့က အမြတ်ထုတ်ခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်ကလည်း ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု အလွန်များသည့် နိုင်ငံရေးစနစ်တခုတွင် ဗမာတိုင်းရင်းသားများက အုပ်ချုပ်သည့် အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် အဆိုပါ နည်းဗျူဟာကိုပင် ကျင့် သုံးခဲ့သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတွင် အပြစ်မြင်တတ်သည့် ချဉ်းကပ်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံသည် “တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ၁၃၅ မျိုး” မှီတင်းနေထိုင်သည့် နေရာဆိုသည့် တပ်မတော်၏ တရားဝင် ပြောဆိုချက်တွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရပါသည်။
သို့သော်လည်း တပ်မတော်က ဆိုလိုသည့် “လူမျိုး” ဟု ဆိုသည်မှာ မရှင်းလင်းပါ။ တပ်မတော်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အချို့ အခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သော တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုး၏ တရားဝင်စာရင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်ရေးအတွင်း နောက်ဆုံး ကောက်ယူခဲ့သော သန်းခေါင်စာရင်း ဖြစ်သည့် ၁၉၃၁ ခုနှစ် အိန္ဒိယ သန်းခေါင်စာရင်းတွင် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယ နွယ်ဖွားများ အပါအဝင် စာရင်းသွင်းထားသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု ၂၀ ထက် မပိုပါ။
ကွဲပြားခြားနားသည့် နိုင်ငံသားအမျိုးမျိုးဖြင့် ကွဲပြားခြားနားစွာ ဖွင့်ဆိုထားပြီး အချို့သော လူမျိုးစုတို့၏ အခွင့်အရေးကို ထိခိုက်နစ်နာစေသည့် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေကလည်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု ၁၃၅ မျိုး ရှိကြောင်း အတိအလင်း ပြောဆိုထားခြင်း မရှိပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတခုက မည်မျှကြာအောင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည် ဆိုသည်ကို မူတည်၍ နိုင်ငံသား အဆင့်အတန်းအမျိုးမျိုးကိုသာ အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည်။
၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေတွင် ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း ကဲ့သို့သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၁၈၂၄-၁၈၂၆ ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စစ်ပွဲမတိုင်မီက မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သော အခြားလူမျိုးများကို မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်သူများဟု သတ်မှတ်သည်။ ဥပဒေတွင် ပထမဆုံး ရောက်ရှိရမည့်အချိန်ကို ဖော်ပြ ထားခြင်း မရှိပါ။ စစ်ပွဲပြီးမှ ရောက်ရှိလာသည့် အခြားသူများကို ဧည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေက ဆိုသည်။
တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးဆိုသည့် သဘောတရားက ရှေ့တန်းသို့ ရောက်လာခဲ့သည်မှာ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး အဖွဲ့ (နဝတ) အမည်ရသည့် စစ်အစိုးရ လက်ထက် ၁၉၉၀ နှစ်များ အစောပိုင်းတွင် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါ တိုင်းရင်း သား လူမျိုးအမည် အသေးစိတ်ကို ထိုစဉ်က အတိအကျ သတ်မှတ်ဖော်ပြခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူ Martin Smith က သူ၏ စာတမ်းတခု ဖြစ်သော ““Ethnic Groups in Burma: Development, Democracy and Human Rights” တွင် နဝတ က တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ၁၃၅ မျိုးရှိသည်ဟု ရည်ညွှန်း ခဲ့သော်လည်း ယုံကြည်လက်ခံနိုင်လောက်သည့် အချက်အလက် သို့မဟုတ် အမည်စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ၁၉၉၄ ခုနှစ်က ရေးသားခဲ့သည်။
တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ အစောဆုံး ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ခြင်းများထဲမှ တခုမှာ ထိုစဉ်က အစိုးရအာဘော် ဖြစ်သည့် လုပ်သား ပြည်သူ့နေ့စဉ် သတင်းစာတွင် ၁၉၉၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့က “တပ်မတော်အရာရှိကြီးတဦး” ကလောင် အမည်ဖြင့် ရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။“မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ၁၃၅ မျိုး မှီတင်း နေထိုင်သည်ဆိုသည့် အချက်က အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်းတခု ရေးဆွဲရာတွင် လူမျိုးကြီး အယူအဆကို အခြေမခံနိုင်ရန် ကာကွယ်ထားသည်” ဟု အဆိုပါ ဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုဆောင်းပါးတွင် အတိအလင်း ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသော်လည်း နောက်ကွယ်တွင်ရှိနေသည့် အယူအဆမှာ အဓိက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ အနေဖြင့် လူမျိုးကြီးဟု သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လူမျိုးကြီးများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရခြင်းများမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရန် သေးငယ်သည့် လူမျိုးစုငယ် အဖွဲ့ခွဲများ အဖြစ် ခွဲခြားသင့်ကြောင်း ဖြစ်သည်။ အတိအကျဆိုရသော် ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ မွန်၊ ရခိုင် နှင့် ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်ကြသည်။
ပထမဆုံးသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ ခုတရားဝင် စာရင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် အမျိုးသား သန်းခေါင်စာရင်း မကောက်ယူမီ အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုစာရင်းတွင် ကွဲပြားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ကချင်ပြည်နယ်တွင် ၁၂ ခု၊ ကယားပြည် နယ်တွင် ၉ ခု၊ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ၁၁ ခု၊ ချင်းပြည်နယ်တွင် ၅၃ ခု၊ ဗမာတိုင်းရင်းသား အုပ်စုတွင် ၉ ခု၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် တခု၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၇ ခုနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ၃၃ ခုရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်မှုများ အားလုံးနီးပါးတွင် လူမျိုးစု သတ်မှတ်ချက်က မရှင်းမလင်း ဖြစ်နေသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် မှ စာရင်းကို ဥပမာ အဖြစ်ပြရလျှင် “တိုင်းလုံ” သို့မဟုတ် “ရှမ်းကြီး” က စာရင်းတွင် ၂ ခါထပ်နေသည်။ တိုင်းလုံ ဟု ဖော်ပြ ပြီးမှ နောက်တနေရာတွင် ရှမ်းကြီးဟု ပါနေသည်။ ထိုအမည် ၂ ခုမှာ ရှမ်းအဓိပ္ပါယ်အရ အတူတူပင် ဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင်လည်း “ခခူ” ကို သီးခြားလူမျိုးစု တခုအနေဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ အမှန်တကယ် အားဖြင့် ခခူ ဆိုသည် မှာ မြစ်ညာ(မြစ်အထက်ပိုင်း)တွင် နေသူများကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ အဓိက ပင်မဖြစ်သော ဧရာဝတီမြစ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည့် မေခ နှင့် မလိခ မြစ်ဆုံ၏ အထက်တွင် နေထိုင်ကြသူများ ဖြစ်သည်။ လူမျိုးမဟုတ်သည့် လူမျိုးစု အဖွဲ့ အစည်းတခု ဖြစ်သည် “ဂေါ်ရီ”ကိုလည်း သီးခြားလူမျိုးစု အဖြစ် စာရင်းသွင်းထားသည်။
ချင်းပြည်နယ်မှ လူမျိုးစု ၅၃ ခုမှာလည်း အမှန်တကယ်အားဖြင့် ချင်းတိုင်းရင်းသားများကြားတွင် ဒေသသုံးစကား အမျိုးမျိုး ကွာခြားနေခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ကျန်တိုင်းရင်းသားများ စာရင်းတွင်လည်း အလားတူပင် ညတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုကြီးများမှ သီးခြားလူမျိုးစုများ ဖန်တီးထားခြင်းများ ရှိနေသည်။
တပ်မတော်က တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ရာတွင် ဂဏန်းဗေဒင်အရ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အချို့က သံသယရှိကြသည်။ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့က တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု ၁၃၅ မျိုး ရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့သည့် အချိန်တွင် လေ့လာသုံးသတ်သူအချို့က ၁ ၊ ၃ နှင့် ၅ ဂဏန်းများကို ပေါင်းလိုက်ပါက ကံကောင်းစေသော ဂဏန်းဟု ယူဆကြသော ၉ ဂဏန်း ရှိကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြသည်။
ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက်က အဓိကကျသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဂဏန်းများ ပေါင်းလဒ် ၉ ရသည့် နေ့များတွင် များသော အားဖြင့် လုပ် ဆောင်လေ့ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ တွင် စစ်တပ် အာဏာသိမ်းယူ ခဲ့သည်။ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၁၉၈၉ ခု ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ချ ထားခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပါတီက အနိုင်ရရှိခဲ့သော ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ် ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၄၅ ကျပ်တန် နှင့် ၉၀ တန် ငွေစက္ကူများပင် ရှိခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ လူမျိုးစုံလင်ကွဲပြားသော၊ လွတ်လပ်ရေး ရသည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကထဲက ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာ ခဲ့ရသော နိုင်ငံတခုတွင် အမျိုးသား ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် ဂဏန်းဗေဒင်ကို လမ်းညွှန်တခု အဖြစ် ထားခြင်းက နားလည်ရခက်စေသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး အတွက် ယခင်က ကြိုးပမ်းမှုများ အားလုံး မည်သည့် အတွက်ကြောင့် ကျရှုံးရသည်ကို ဆင်ခြင်တွက်ဆ၍ ပိုမို လက်တွေ့ကျပြီး အဖြစ်မှန်ကို အခြေခံသော ချဉ်းကပ်မှုတခု လိုအပ်နေပါသည်။
တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု အဖွဲ့အများအပြားကက တောင်းဆိုသလို ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတခု ပေါ်ပေါက် လာရန် ဖြစ်စေ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုကွဲပြားခြင်းကြောင့် တိုင်းပြည် အစိတ်စိတ်မကွဲစေရန် ကာကွယ်ရမည်ဟု တပ်မတော်က ယုံကြည် ထားသည့် အတိုင်း ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကြီးမားသော ပုံစံကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် ဖြစ်စေ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် အကယ်၍ အဆိုပြုထားသည့် တိုင်းရင်းသားစု တခုတိုင်းကို ကိုယ်စားပြုသည့် ကိုယ်စားလှယ်နေရာ ၁၃၅ ခု အထိရှိနေခဲ့ လျှင် ပြဿနာက မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြေလည်သွားနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
( Asia Times ပါ ဘာတေးလင့်တနာ၏ A question of race in Myanmar ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်)
From : ဧရာဝတီ by Bertil Lintner
ကျောက်ဖြူက အာရှစီးပွားရေးမှာ အချက်အချာ ဖြစ်လာ မတဲ့လား?
မဒေးကျွန်းပေါ်ရှိ တရုတ် စီမံကိန်း အဆောက် အဦးများ နောက်ခံနှင့် ဒေသခံ တံငါတဲများ / Reuters
China International Trust and Investment Company (CITIC) ၏ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း များကို ကြော်ငြာသော ၁၃ မိနစ်ကြာ ဗီဒီယိုတွင် စင်္ကာပူ၊ ဟောင် ကောင်နှင့် ထိုင်ဝမ်ရှိ ဒါစီ ဆိပ်ကမ်း များ၏ စက်မှု ဆိပ်ကမ်း မတိုင်မှီက ပုံရိပ်များသည် တဖြည်းဖြည်း အဆင့်မြင့် သံမဏိနှင့် ဖန်သားများ အသုံးပြုထားသော ခေတ်မှီ အဆောက် အအုံများ အဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားသည့် အံ့သြဖွယ်ရာ လျင်မြန်သော အာရှစီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို ပြသထားသည်။
သို့သော် နောက်ဆုံးပုံမှာ အထူးသဖြင့် တုန်လှုပ်စရာ ကောင်းသည်။ ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောတစင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ရခိုင် ပြည် နယ်မှ ယခု အချိန်တွင် ကျေးလက်ဒေသသာ ဖြစ်နေသေးသော ကျောက်ဖြူရှိ စိတ်ကူးဖြင့် ပုံဖော်ထားသော ခေတ်မှီဆိပ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ကပ်လာပုံကို ပြသ ထားသည်။ ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်းကို CITIC က နောက်ထပ် ကမ္ဘာ့မဟာ စီးပွားရေး အချက်အချာ ဒေသအဖြစ် ရည်ရွယ်ထားသည်။
ကျောက်ဖြူကို ခေတ်နောက်ကျသည့် နေရာတခု အဖြစ်မှ အေင်မြင်သော ဆိပ်ကမ်းတခု အဖြစ် ပြန်လည် ဖန်တီးခြင်း သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ One Belt One Road (OBOR) အစီအစဉ်တွင် သေးငယ်သော်လည်း ချန်လှပ် မထားနိုင်သော အစိတ်အပိုင်း တခု ဖြစ်သည်။
OBOR သည် ဘေကျင်းကို အနာဂတ် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးတွင် ဗဟိုချက် ဖြစ်လာစေမည့် ကြီးမားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ စီမံကိန်းများနှင့် စီးပွားရေး လမ်းကြောင်းများ တည်ဆောက်ရေး အစီအစဉ် ဖြစ်သည်။
ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံခန့် ကုန်ကျမည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံက ခန့်မှန်းထားသည့် ထိုလမ်းများ၊ ပိုက်လိုင်းများ၊ ရထားလမ်းများနှင့် ဆိပ်ကမ်းများ၏ ကွန်ယက်သည် ပြီးစီးသွားမည် ဆိုလျှင် နိုင်ငံပေါင်း ၆၀ နှင့် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆက်သွယ် ပေးမည် ဖြစ်ပြီး ဥရောပနှင့် အာရှတဝန်းတွင် ဖြစ်လာသော တိုးတက်မှုများနှင့် အတူ ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးများကို ပြန်လည် ချမှတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိုမဟာစီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိနှင့်နေပြီး ဖြစ်ကာ ကျေးလက်ကမ်းရိုးတန်း မြို့နယ်လေး ဖြစ်သော ကျောက်ဖြူတွင် တရုတ်နိုင်ငံက စီမံသော ရေနက်ဆိပ်ကမ်း နှစ်ခုနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် တခု တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ ထိုဒေသသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်နိုင်ငံ ကုန်းတွင်းပိတ် အနောက်တောင်ပိုင်း ပြည်နယ် ဖြစ်သောယူနန်သို့ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့စတင် ပို့လွှတ်နေသည့် ပိုက်လိုင်း ၂ ခု တည်ရှိရာ နေရာလည်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယခင် အရပ်သားတပိုင်း အစိုးရလက်ထက်တွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ခိုင်မာကျယ်ပြန့်သော စီးပွားရေး ဆက်ဆံမှု ပြန်လည် စတင်လိုဟန် ရှိသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် တွင် အာဏာလွှဲပြောင်း ပေးပြီးနောက်တွင် ကျော်ဖြူဒေသ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ပြန်လည် စတင်လာခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော ဧပြီလက မြန်မာသမ္မတ ဦးထင်ကျော် သည် ကာလကြာရှည်စွာ စောင့်ဆိုင်းနေရသော ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံခွဲ တန်ကြေးရှိပြီး ကီလိုမီတာ ၇၇၀ ရှည်သည့် ရေနံစိမ်းပိုက်လိုင်း အတွက် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။ ထို ပိုက်လိုင်းကို စွမ်းရည်အပြည့် သုံးနိုင်ပါက တရုတ်နိုင်ငံ ရေနံစိမ်း တင်သွင်းမှု၏ ၆ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ပို့ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ထိုပိုက်လိုင်းကြောင့် ကျဉ်းမြောင်းပြီး ပင်လယ်ဓားပြ ပေါလှသည့် မလက္ကာ ရေလက်ကြားနှင့် တင်းမာမှု မြင့်မားသည့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကို ဖြတ်သန်း အသုံးပြု သယ်ဆောင်ရန် မလိုတော့ဘဲ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ရေနံကို ရခိုင်ပြည်နယ် မဒေးကျွန်းမှ တဆင့် တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် အထိ ပို့နိုင်သည်။ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားလာလျှင် တရုတ်လောင်စာ လမ်းကြောင်းကို မလက္ကာရေလက်ကြားတွင် အမေရိကန်က ရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှု ပြုလုပ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကိုလည်း လျှော့ချရှောင်လွှဲပေးသည်။
ထိုပိုက်လိုင်းကို စတင်အဆိုပြုပြီး ဆယ်စုနှစ် တခုကျော် အကြာ မေလ ၃ ရက် နေ့တွင် ရေနံစိမ်းများသည် ကျောက်ဖြူမှ ယူနန်ပြည်နယ်ရှိ တရုတ်အမျိုးသား ရေနံကော်ပိုရေးရှင်း၏ ရေနံချက်စက်ရုံသို့ စတင် စီးဆင်းသည်။ ထိုရေနံပိုက်လိုင်းသည် ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံတန် ကီလိုမီတာ ၂၈၀၀ ရှည်သည့် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနှင့် ယှဉ်လျှက်တည်ရှိသည်။ ထို ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကပင် စတင်အသုံးပြုနေပြီး ကုန်းတွင်းရှိ ကွေ့ကျိုးပြည်နယ်နှင့် ကျန်စီပြည်နယ်များ အထိ ရှည်လျှားသည်။
တရုတ်-မြန်မာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြီးစီးပြီး တရုတ်နိုင်ငံ အတွက် ပြည်ပလောင်စာ ရင်းမြစ်များ တိုးပွားလာကာ စွမ်းအင်လုံခြုံမှု ပိုမိုအားကောင်းလာစေသည်။ ကီလိုမီတာ ၂၅၂၀ ရှိ ထို သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက် ဘက် ကမ်းခြေ ကျောက်ဖြူမှ စတင်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ ယူနန် ပြည်နယ် ရွှေလီတို့မှ ဝင်ရောက်ကာ ကျန်စိဇူအမ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ ကန်ကန်းတွင် ပြီး ဆုံးသည်။
၎င်းသည် အနောက်တောင် ပြည်နယ်များ ဖြစ်သော ကျန်စိ၊ ယူနန်နှင့် ကွေ့ကျိုးပြည်နယ်များသို့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပို့ဆောင်ပေး သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သော ထိုပိုက်လိုင်းသည် နှစ်စဉ် ဓာတ်ငွေ့ ၁၂ ဘီလီယံ ကုဗမီတာပို့ လွှတ်နိုင်ပြီး ၁၀ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ တင်ပို့နေသည်။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရရှိနေသော ပြည်နယ် ၃ ခု၏ အကျိုးစီးပွားများတွင် ပြည်တွင်း အသုံးစရိတ်များ သက်သာလာခြင်းနှင့် လောင်စာဆီ လုပ်ငန်းအတွက် စွမ်းအင် ပိုမိုရရှိခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ကျောက်ဖြူ စီမံကိန်းမှ တရုတ်ရေနံလှောင်ကန်များ
ကျောက်ဖြူရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကျယ်ပြန့်လှသော အစီအစဉ်သည် ပိုမို အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်သော တရုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း ဖြစ်သည့် မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်မှ ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံတန် မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း အတွက် အလဲအလှယ် အဖြစ် ရသော နှစ်သိမ့်ဆုဟု သုတေသီ အချို့က မြင်ကြသည်။
ဘေကျင်းသည် ထိုကာလကြာရှည်စွာ ဆိုင်းငံ့ထားရသော ရေအားလျှပ် စစ်စီမံကိန်းကို စွန့်လွှတ်နိုင်ကြောင်း လွန်ခဲ့သော လက ပထမဆုံး အကြိမ် အရိပ်အမြွက် ပြောလာသည်။ ထိုစီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်တွင် စီစဉ် ထားသော တရုတ်ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၇ ခုအနက် တခု ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၆၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်ကာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့မည် ဖြစ်သည်။
ကျယ်ပြန့်သော ဆန့်ကျင်မှုများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စွမ်းအင် မလုံလောက်မှုကြောင့် တရားမျှတမှု အပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ထိုစီမံကိန်းကို အချိန် အကန့်အသတ်မရှိ ဆိုင်းငံ့ခဲ့သည်။ ထိုဆည် စီမံကိန်းသည် မြစ်အောက်ပိုင်း စပါးစိုက်ပျိုးသူများ အတွက် အသက်သွေးကြော ဖြစ်သော ဧရာဝတီမြစ်၏ ရေစီးဆင်းမှုကို အကြီးအကျယ် အဟန့်အတား ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟု ဆန့်ကျင်သူများက ပြောသည်။
ထိုဆည်စီမံကိန်းနှင့် ကျောက်ဖြူစီမံကိန်းများ အလဲအလှယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူတိုင်းသိနေသော လျှို့ဝှက်ချက် ဖြစ်သည် ဟု ရန်ကုန် အခြေစိုက် အတိုင်ပင်ခံ လုပ်ငန်း ဖြစ်သော တကောင်းအင်စတီကျု မှ သုတေသီ ကိုစိုးမြင့်အောင် က ပြောသည်။ “ဗျူဟာအရ ကြည့်ရင် ကျောက်ဖြူပိုက်လိုင်းနဲ့ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း အသုံးပြုခွင့်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ အတွက် မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းထက် ပိုအရေးကြီးတယ် ဆိုတာ သံသယရှိစရာ မလိုပါဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံက ဒါကို အပေးအယူအနေနဲ့ လုပ်မယ့်သဘော ရှိပါတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ထို ဆည်စီမံကိန်းအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး ဖြစ်သော ခန့်မှန်းခြေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို အကြပ်ကိုင်နိုင်သည်။ ဆည်စီမံကိန်းကို ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း အတွက် ဒဏ်ကြေးမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀ အထိ ရှိလာပြီဟု ဝါရှင်တန်ရှိ စမစ်ဆွန်စင်တာမှ သုတေသီ ယွန်ဆန်က သတင်းဌာနများသို့ ပြောသည်။
သို့သော် ထိုဆုံးရှုံးမှုများကို တရားဥပဒေကြောင်း အရ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံ တောင်းခံခြင်းသည် ကျောက်ဖြူအပါအဝင် မြန်မာ နိုင်ငံမှ တရုတ်၏ စီးပွားရေး အကျိုးစီးပွားများကို အန္တရာယ် ကျရောက်သွားစေနိုင်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းစုကြီး တခုဖြစ်သော CITIC ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းက ကျောက်ဖြူ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်ခွင့် ပေးထားသည်။
CITIC အုပ်စုသည် မြန်မာနိုင်ငံက ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်က အဆိုပြုထားသည့် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းစီ ပိုင်ဆိုင်မှုကို လက်မခံဘဲ ကျောက်ဖြူစီမံကိန်း၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရရန် တောာင်းဆိုနေသည် ဟူသော သတင်းများလည်း မကြာသေးမီက ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထိုအချက်မှာ ကျောက်ဖြူစီမံကိန်း၏ တရုတ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွား အတွက် ဗျူဟာတန်ဖိုး မြင့်မားမှုကို ပြသနေသည်။
ပိုက်လိုင်းများ၏ အကျိုးအမြတ် အပြင် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ၂ ခု နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ စစ်တကောင်းမှ အလားတူ စီမံကိန်းများ၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမှ ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းနှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှ ဂွာဒါဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း တို့သည် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဓရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အနေအထားကို ပိုမိုတောင့်တင်းစေရန် ရည်ရွယ်သော ပုလဲကုံးသဖွယ် စီတန်းတည်ရှိ နေသော ဆိပ်ကမ်းများ အဖြစ် ဗျူဟာလေ့လာရေး သုတေသီများက ခေါ်ဆိုကြသည်။
အိန္ဒိယသမုဒ္ဓရာ ဆိပ်ကမ်းများတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အတွက် သက်သက်သာ ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့ အတွက် အရေးပါသော ကုန်စည်တင်ပို့မှုများတွင် ပင်လယ်ဓားပြနှင့် အခြား ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ကာကွယ်ရန် တရုတ်ရေတပ် သင်္ဘောများကို လက်ခံထားရန် အတွက်လည်း သုံးနိုင်သည် ဟု သုတေသီများက ပြောကြသည်။
သို့သော် ကျောက်ဖြူဒေသခံများမှာမူ ပိုက်လိုင်း အတွက်ပင် တန်ဖိုးပေးဆပ်နေရပြီး ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကျောက်ဖြူ အစီအစဉ်သည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိရုံမျှသာမက ဒေသခံများ နေရာရွှေ့ပြောင်းရခြင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ခြင်း တို့ကို တရုတ်နိုင်ငံက လျစ်လျူရှုထားခြင်း ကိုလည်း ပြသနေသည်။
“ထိခိုက်နစ်နာ သူများ၏ အခွင့်အရေးများကို လေးစားလိုက်နာရန် မလိုဟု ထိုတရုတ်ကုမ္ပဏီက ယူဆနေပြီး မည်မျှ ပေးဆပ်ရသည် ဖြစ်စေ သူတို့တွင် ပိုက်လိုင်းများကို အကောင်အထည် ဖော်ခွင့် ရှိသည်ဟု ထင်နေသည်” ဟု ဒေသခံ လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သည့် တရုတ်-မြန်မာ ပိုက်လိုင်းစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ တစောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုအစီရင်ခံစာတွင် ဒေသများကို အသိပေး အကြံဉာဏ် တောင်းခံရန် ပျက်ကွက်မှုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖော်ပြ ထားပြီး စာရွက်စာတမ်းများကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရသော လယ်သမားအချို့မှာ လျော်ကြေးရသော အခါမှသာ ၎င်းတို့ပိုင် မြေကို အပြီးအပိုင် သိမ်းဆည်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိကြရသည် ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက ထုတ်ပြန်သော ဥပဒေအခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်း နိုင်ငံတကာဂျူရီ လူကြီးများ ကောင်စီ၏ အစီရင်ခံစာ တစောင်အဆို အရ အချို့သော ကျောက်ဖြူဒေသခံများသည် လျှော်ကြေး ရယူရန် အတွက် ဖိအားပေးခံရပြီး အထူးသဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ငါးဖမ်းခြင်း ကဲ့သို့သော သက်မွေးဝမ်းကျောင်းများကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း မရှိကြတော့ ဟု ဆိုသည်။
“ဆုံးဖြတ်ချက်ချသော လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပြည်သူလူထု ပါဝင်နိုင်ခြင်း လုံးဝမရှိပေ” ဟု နိုင်ငံတကာ ဂျူရီလူကြီးများ ကောင်စီ၏ ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ အစီရင်ခံစာကို ဦးဆောင်ရေးသားသူ ရှောင်ဘိန်းက ဆိုသည်။ ဒေသခံများ၏ ဆန့်ကျင်မှု မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလက ဒေသခံ လယ်သမားတစုသည် နောက်ဆုံးအကြိမ် လျှော်ကြေးငွေကို လက်မခံဘဲ ၎င်းတို့၏ လယ်မြေများကို ဖျက်ဆီးခြင်း အတွက် တရုတ်အမျိုးသား ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကို တရားစွဲမည် ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာ-တရုတ် ပိုက်လိုင်းစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီက တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သော လယ်သမားများ၏ ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် လျှော်ကြေး ပေးသည့် ပမာဏကို မကျေနပ်ကြဘဲ လျှော်ကြေးမှာ သီးနှံဆုံးရှုံးမှု အတွက်သာ ပါဝင်ပြီး မြေပိုင်ဆိုင်မှု အတွက် မပါဝင် ဟု ပြောကြသည်။ စီမံကိန်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် ဒေသခံများကို ဦးစားပေး စဉ်းစားမည့် ပုံလည်း မရှိဟု ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ နောက်ထပ် စီမံကိန်းကြီးတခု နီးကပ်လာသည့် အလားအလာများကြောင့် ထိုပူပန်မှုများကို ပိုမိုဆိုးရွား စေခဲ့သည်။ ကျောက်ဖြူတွင် အထူးစီးပွားရေးဇုန် တည်ဆောက်ရန် အတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် မြေ ၄၂၈၉ ဧကကို CITIC အုပ်စု ခေါင်းဆောင်သည့် လုပ်ငန်းစုအား ချထားပေခဲ့သည်။
ထိုစီမံကိန်းတွင် ၂၀၃၈ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးမည့် ကျယ်ပြန့်သော စီးပွားရေး အချက်အချာ နေရာများ ပါဝင်ပြီး စင်္ကာပူနှင့် ဟောင်ကောင် ကုန်သွယ်ရေး အချက်အချာ ဒေသများကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်ဟု CITIC အုပ်စု၏ ရည်မှန်းချက်ကြီးသော ကြော်ငြာ ဗီဒီယို အရ သိရသည်။ အခွန်နှင့် အကောက်အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်၊ နှစ် ၅၀ မြေငှားခွင့် ကဲ့သို့သော မက်လုံး ပေးခြင်းများ ပါဝင်သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေသည် စီမံကိန်းကြီးများကို ကြီးကြပ် စီမံရန် အထူးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ထူထောင်ပေးသည်။
သို့သော် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီများကို ဝန်ကြီးဌာန အရာရှိများနှင့် သာမက ပုဂ္ဂလိက စီးပွာရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ပါ ဖွဲ့စည်းထားသဖြင့် အကျိုးစီးပွားချင်း ပဋိပက္ခ ဖြစ်နိုင်သည် ဟု ဝေဖန်သူများက ပြောကြသည်။ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ပေးခြင်း မရှိပါက ကော်မတီ၏ တာဝန်ခံမှုနှင့် ဒေသခံများကို အခွင့်အရေး အကာအကွယ်ပေးရန် တာဝန်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိသောကြောင့် အခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွာစေသည် ဟု ၎င်းတို့က ပြောသည်။
အထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ ပထမဆင့်တွင် မိသားစု ၇၀ မှ ၈၀ ကို ပြန်လည် နေရာချထားရမည် ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းကို အပြည့်အ၀ အကောင်အထည် ဖော်လျှင်၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြို့နယ်အတွင်းရှိ လူဦးရေ၏ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိသော နောက်ထပ်လူ ၂၀၀၀၀ နှင့် လက်ရှိကျေးရွာပေါင်း ၃၅ ရွာ ပါဝင်သောနေရာကို အတင်းအကျပ် ပြန်လည် နေရာ ချထားရမည် ဟု နိုင်ငံတကာ ဂျူရီလူကြီးများ ကောင်စီက ခန့်မှန်ထားသည်။
“နိုင်ငံတိုင်းက အချို့သော အခြေအနေတွေမှာ အများပြည်သူ အကျိုးအတွက် မြေယာတွေကို ရယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်” ဟု ရှောင်ဘိန်းက နိုင်ငံတို့၏ အခွင့်ရေး ပြဌာန်းချက်ကို ရည်ညွှန်း ပြောသည်။ “ကျနော်တို့ စိုးရိမ်တာက ဒီလူ ၂၀၀၀၀ ကို လက်ရှိ အခြေအနေမှာ ပြန်လည် နေရာချထားတာဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ၂၀၀၀၀ ဖြစ်လာမှာ ကိုပါ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မြန်မာခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန် အတွက် အစိုးရ၏ ကတိကဝတ်များကို ထပ်မံ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံ လိုအပ်ချက် များစွာ ရှိနေပြီး ကျွမ်းကျင်မှု မရှိသော အရေးပေါ် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတခု အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကြီးမားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရသည် အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးနိုင်သော နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက မောင်းနှင်သည့် စီးပွားတိုးတက်ရေး မျှော်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ ရခိုင်ပြည်နယ်သည် စီးပွားရေး တွန်းအား အကြီးအကျယ် လိုအပ်နေပြီး အချို့သော တိုင်းတာမှုများ အရ ထိုပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆင်းရဲဆုံးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု အနိမ့်ကျဆုံး နေရာ ဖြစ်နေသည်။ တရုတ်ကျောထောက် နောက်ခံပြု အထူး စီးပွားရေးဇုန်သည် အထူးသဖြင့် အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းသာမက အစားအသောက်၊ ရေနံဓာတုလုပ်ငန်းနှင့် စက်တပ်ဆင်လုပ်ငန်းများ အထိ တို့တွင် လုပ်ခနည်းသော အလုပ်အကိုင် ထောင်ချီ ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။
ရေနံပိုက်လိုင်းသည် နှစ်စဉ် လုပ်ငန်း လည်ပတ်ခ ဒေါ်လာ ၁၃ ဒသမ ၈ သန်းနှင့် ဖြတ်သန်းခ ရေနံစိမ်း ၁ တန်လျှင် ၁ ဒေါ်လာ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေအဖြစ် ရနေမည် ဖြစ်သည်။ ထိုပိုက်လိုင်းကို ၁ နှစ်လျှင် တန်ချိန် ၂၂ သန်း တင်ပို့နိုင်ရန် စီစဉ် ထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း အတွက် ကနဦး နှစ် ၃၀ တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀ ဘီလီယံ ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဆန့်ကျင်သူ ရှာဖွေရန် ခက်ခဲကြောင်း နိုင်ငံတကာ ဂျူရိလူကြီးများ ကောင်စီမှ ရှောင်ဘိန်း က ဝန်ခံသည်။ သို့သော် လူ့အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်လေးစားရန် အတွက်နှင့် ထိုစီမံကိန်းများမှ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပြည်သူလူထု ခံစားနိုင်ရေး အတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ကတိပြုထားသည့် အစိုးရအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဥပဒေများကို လိုက်နာရန် လိုသည်ဟု ဘိန်း က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ထိုကြောင့် ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် လုပ်ရမည့်သဘော ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် မြေအသုံးပြုမှုနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် နစ်နာမှုများ အတွက် စောင့်ကြည့်ရေးနှင့် ဥပဒေယန္တရားများ ထူထောင်ရန် အတွက် အထူးသဖြင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေနှင့် တရားဥပဒေ မူဘောင်များကို ပြုပြင်ရန် နိုင်ငံတကာ ဂျူရီလူကြီးများ ကောင်စီက အကြံပြုထားသည်။
သန့်ရှင်းသော အစိုးရဟူသော ကြွေးကြော်သံဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်က အာဏာရလာသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ဒေသခံများကို စတေးပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့် ဗျူဟာ အကျိုးစီးပွားကို လိုလားသူ အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရမည်ကို စိုးရိမ်ပါလိမ့်မည်။ စစ်တပ် ကျောထောက်နောက်ခံပြု အရပ်သားတပိုင်း အစိုးရသည် မြစ်ဆုံဆည်ကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည် မှာလည်း ထိုသို့ သတ်မှတ်ခံရသောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။
သို့သော် သူမ၏ အစိုးရတွင် ရွေးချယ်စရာ များများစားစား မရှိတော့ဟု အကြံပေးအဖွဲ့ တခုဖြစ်သည့် CSIS Pacific Forum မှ ကိုနေရန်ဦးက ပြောသည်။ “အမျိုးသာဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အစိုးရ အနေနဲ့ မြစ်ဆုံဆည်ကို ဖျက်သိမ်းချင်ရင် တရုတ်ကို တခုခု ပြန်ပေးဖို့ လိုလိမ့်မယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ကျောက်ဖြူ စီမံကိန်းမှ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း
သို့သော် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှာ ကဲ့သို့ပင် ကျောက်ဖြူ စီမံကိန်းကိုလည်း ဒေသခံများ၏ ဆန့်ကျင်မှုမှာ ကြီးထွား လာနေသည်။ မေလ ၂၂ ရက်နေ့က ဒေသခံ ရေလုပ်သား ၅၀၀ ခန့်သည် ရေနံတင်သင်္ဘော လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ပြီး ပိုက်လိုင်းများနှင့် ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းများကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည်။ သူတို့က ၎င်းတို့၏ ငါးဖမ်းရန် နေရာကို ပိတ်ဆို့ခံနေရသည်ဟု ပြောသည်။
“သမိုင်းကို လမ်းညွှန်အဖြစ် သုံးရမယ် ဆိုရင် လက်ရှိနဲ့ အနာဂတ် မြန်မာ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အိမ်နီးချင်း တရုတ်နိုင်ငံကို အကျိုးဖြစ်စေမယ့်၊ တရုတ်နိုင်ငံက အပြည့်အဝနီးပါး ထိန်းချုပ်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းတွေကို ကြော်ငြာပေးတယ်၊ သဘောတူတယ် ဆိုတာမျိုးကို လုံးဝ အထင်ခံချင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု တသီးပုဂ္ဂလ သုတေသီ ရီနဒ်အက်ဂရက်တူး က ပြောသည်။
“ဒေသတွင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ သံသယတွေ အကြီးအကျယ် ရှိနေကြတုန်းပဲ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
(Eli Meixler ၏ Asia’s next great commercial hub? ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်သည်။)
From : ဧရာဝတီ by By Eli Meixler 15 June 2017
နှစ် ၁၀၀ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် အမျိုးသမီးဝန်ကြီး ၄ ဦးသာရှိသည်
၁၉၂၀ ခုနှစ်မှ ယခု အချိန် အထိ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီး ၄ ဦးသာ အစိုးရ ဝန်ကြီး ဌာန အကြီးအကဲ အဖြစ် ခန့်အပ်ခံ ခဲ့ရသည်။
ထိုသို့ အလေး အနက် စဉ်းစား စရာ အချက်မှာ သုတေသီ ဦးသန်းထွန်း (မော်လမြိုင်) ရေးသားပြီး မကြာသေးမှီက ထုတ်ဝေသော မြန်မာ့သမိုင်း အဆင့်မှ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အဘိဓာန် (A Dictionary of Biographies in Myanmar Chronological Order) စာအုပ် အရ ထင်ရှား လာသည်။
ထိုစာအုပ်သည် ၁၉၂၀ မှ ၁၉၈၈ အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတများ၊ ဒုသမ္မတများ၊ ဝန်ကြီးချုပ်များနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၏ ကိုယ်ရေး အကျဉ်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။
ထိုစာအုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုလိုနီခေတ်မှ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်၊ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်များ အထိ ကာလကို ဖော်ပြထားသည်။
နှစ် ၇၀ ကာလအတွင်း ဝန်ကြီးနေရာ စုစုပေါင်း ၂၀၀ ကျော်အနက် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ၄ နှစ်အကြာ ၁၉၅၂ ခုနှစ်က ပါလီမန်အမတ် အဖြစ် အရွေးခံရသော အမျိုးသမီးများ အနက် တဦးဖြစ်သူ ကရင်တိုင်းရင်းသူ ကလာရီဘယ် အာရင်း ပို (Claribel Irene Po) အမည်ရှိ အမျိုးသမီး ဝန်ကြီးတဦးသာ ပါဝင်သည်။
သူသည် ကရင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဖြစ်လာကာ ၁၉၅၂ ခုနှစ် မတ်လမှ ၁၉၅၃ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့အထိ ဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ သို့သော် သူ၏ ရာထူးသက်တမ်း နောက် ပိုင်းတွင် ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းချိန်မှကာ အမျိုးသမီး ဝန်ကြီး ကင်းမဲ့ခဲ့သည်မှာ ရာစုဝက်နီးပါး ကာလတခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်း များစွာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပြီး ဖိနှိပ်မှုကို တွန်းလှန်ရန်နှင့် ထိပ်တန်းနိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်ရန် အမျိုးသမီးများ၏ အားထုတ်မှုများ ရှိသော်လည်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ တိမ်မြုပ်နေခဲ့ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရာစုနှစ် တခုနီးပါး အတွင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အဆင့် အမျိုးသမီး ၄ ဦးသာ ရှိသည် ဟူသော အချက်သည် ကျား၊ မ တန်းတူမှု မရှိခြင်းကို မီးမောင်းထိုးပြနေသည် ဟု ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှရေး ကွန်ရက်မှ ဒါရိုက်တာ မမေစံပယ်ဖြူ က ပြောသည်
အာဏာရှိသော ရာထူးများမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ အတွက်သာ ဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် နိုင်ငံရေးတွင် အမျိုးသမီးများ ကင်းမဲ့ နေရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့် ဖြစ်သည် ဟုလည်း သူက ပြောသည်။
“အရည်အချင်းရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် မျှတမှု မရှိဘူး” ဟုလည်း သူက ဆက်ပြောသည်။ ဝန်ကြီးရာထူးတွေကို တိုက်ရိုက်ခန့်မယ့် အစား ရွေးကောက်ခဲ့ရင် အမျိုးသမီးတွေ ပိုပြီးနေရာရလာမှာ ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
စစ်အစိုးရက ထိုစဉ်က ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သော အရပ်သားတပိုင်း အစိုးရသို့ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သော ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အချို့ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၃၆ နေရာတွင် အမျိုးသမီး ဝန်ကြီး နှစ်ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ကာ ယခင် နှစ်ပေါင်း ၆၀ နီးပါးက မစ္စဘမောင်ချိန် ချန်ထားခဲ့သည့် တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ ကြသည်။
ထိုစဉ်က အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ကျန်းမာရေး ဒုဝန်ကြီး ဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင် ကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီး အဖြစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ယခင် အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုတိုးတက်မှု ဒုဝန်ကြီး ဒေါ်ခင်စန်းရီ သည် ၂၁၀၄ ခုနှစ်တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ၂၁၀၅ ခုနှစ်တွင် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန စသည့် ဝန်ကြီးဌာန ၂ ခုကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူ့ကို ဝန်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းမှာ ထိုဝန်ကြီးဌာန တခုစီတွင် အမျိုးသားဝန်ကြီးများ ကွယ်လွန်မှသာ ခန့်အပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် အမျိုးသမီး ဒုတိယဝန်ကြီး ၅ ဦးကိုလည်း ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ ခန့်အပ်ခြင်းများ ရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်း အမျိုးသမီးပါဝင်မှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံများအနက် တခု ဖြစ်နေသည်။ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် မလေးရှားအပါအဝင် ဒေသတွင်းမှ အချို့သော နိုင်ငံများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးဝန်ကြီး တဒါဇင်စီ ရှိကြသည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံသည် ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ဖိလစ်ပိုင်အပါအဝင် အမျိုးသမီးက နိုင်ငံကို ခေါင်းဆောင်သော လက်တဆုပ်စာ နိုင်ငံများတွင် ပါဝင်နေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ရှားဆုံး ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် သူ၏ ပါတီဖြစ်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တို့သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ်အသတ် အနိုင်ရကာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဦးဆောင်သော ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများကို ဖယ်ရှား လိုက်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အာဏာရလာခြင်းနှင့် အတူ အစိုးရအဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီး အရေအတွက် ပိုမို များပြားလာမည် ဟု မျှော်လင့်ခဲ့ကြသော်လည်း အစိုးရအဖွဲ့တွင် ပါဝင်လာသည့် တဦးတည်သော အမျိုးသမီးမှာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေသည်။
နိုင်ငံခြားသား ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သားသမီးရှိသော မည်သူမဆို သမ္မတ မဖြစ်လာနိုင်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြဌာန်းချက် ကြောင့် မဲဆန္ဒရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ ခေါင်းဆောင်ကို သမ္မတအဖြစ် မမြင်ကြရပေ။ သို့သော် သူမသည် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ရာထူးနှင့် ဝန်ကြီးဌာန ၂၂ ခုအနက် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးရာထူး ၂ ခုကို ယူထားသည်။ ယခင် အစိုးရခေတ်က ဝန်ကြီးဌာန ၃၆ ခုကို ယခု အစိုးရက ၂၂ ခုသို့ ပြန်လည် လျှော့ချခဲ့သည်။
အစိုးရအဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီး တဦးတည်းသာ ပါဝင်ခြင်းကို မျှော်လင့် မထားခဲ့ကြသလို အမျိုးသမီးအရေး ဆောင်ရွက်သူများ အတွက် စိတ်ပျက်စရာလည်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့က အစိုးရ ကဏ္ဍများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသော အဆင့်တွင် အမျိုးသမီး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ရေးအတွက် ဆက်လက် လုပ်ဆေုင်နေကြရသည်။
သို့သော် ယခင်အစိုးရနှင့် မတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် အမျိုးသမီး ပြည်နယ်/တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ၂ ဦး ရှိလာသည်။ ၎င်းတို့ ၂ ဦးမှာ တနင်္သာရီတိုင်းမှ ဒေါက်တာဒေါ် လဲ့လဲ့မော်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်မှ နန်းခင်ထွေးမြင့် တို့ ဖြစ်သည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မဇင်မာအောင်က ရာစုနှစ်တခု နီးပါးအတွင် အမျိုးသမီးဝန်ကြီး ၄ ဦးသာ ရှိသည့် စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းသော ကိန်းဂဏန်းများ သည် သူမနှင့် အခြားအမျိုးသမီးများ ပိုမိုအားထုတ် လုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းနေသည့် အချက်အဖြစ် ယူဆသည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်မှသာ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် ပိုမိုမျှတစွာ ကိုယ်စားပြုခွင့် ရမည် ဟု သူက ပြောသည်။
“ဒါဟာ နိုင်ငံရေးစနစ်တွေနဲ့ လူမှုရေး စံနှုန်းတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီး တယောက်အနေနဲ့ ဒီအချက်က ကျမကို လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အလုပ်ပိုမို ကြိုးစားဖို့ အားပေးနေတယ်” ဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မဇင်မာအောင်အောင် က ပြောသည်။
လွှတ်တော် အသီးသီးတွင် အမျိုးသမီး ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်လာသဖြင့် ယခင် အစိုးရ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ယှဉ်လျှင် အမျိုးသမီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက်မှာ ၃ ဆ တိုးလာသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အဆင့်၌ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု နည်းခြင်းကြောင့်ပင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ရှမ်းပြည်နယ်မှ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မ ဖုန်းကေသီနိုင် ကလည်း ပြောသည်။
“ဒီအချက်က စိတ်ပျက်စရာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ စိတ်ပျက်ရင် အလုပ် မဖြစ်ဘူး။ ကျမကတော့ ဒါဟာ ဥပဒေပြုတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ကျား၊ မ တန်းတူမှု ပိုမိုရှိလာအောင် လုပ်ဖို့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ဖြစ်စေတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
(www.irrawaddy.org တွင် ဖော်ပြထားသည့် စမ်းယမင်းအောင်၏ Burma’s Gender Gap: Only Four Women Ministers in NearlyaCentury ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်သည်။)
From : ဧရာဝတီ by စမ်းယမင်းအောင်